October 2017 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့သူတွေနဲ့ အပြန်အလှန်လုပ်ရသေးတယ်။ အချိန်ပိုကုန်တယ်။
ဆရာရှင့့့် က အသက် ၂၃၊ ဘန်ကောက်မှာနေပါတယ်ရှင့်။ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ဖုလေး သေးသေးလေးတွေ့လို့ပါ။ နာကျင်မှု့လဲမရှိပါဘူး ဆေးရုံမှာသွားစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလားရှင့်။
အကျိတ်ကို တိတိကျကျပြောပါ။ နေရာ။ အရေအတွက်။ အရွယ်အစား။ ပုံပန်း။ ရွေ့ရ မရ။ နာ မနာ။ ကြီးလာ မလာ။
လည်ပင်းနဲ့ ဂုတ်ကြားမှာပါ ညာဖက်မှာပါရှင့် လက်တဆစ်လောက်ပဲရှိတာပါ တစ်ခုထဲပါရှင် မနာပါရှင့်။ သတိထားမိတာ သုံးရက်လောက်ရှိပြီ။ ကြီးလဲမလာပါဘူးရှင့် ရွှေ့လို့ရပါတယ်ရှင့်။
လည်ပင်းနဲ့ ဂုတ်ဆိုတာ မရှင်းပါ။ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားရင် မေးလိုက မေးပါ။ ပါရာစီတမောသောက်ရင် နာတာ + ရောင်တာ သက်သာမယ်။ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။ ၄-၅ ရက်။
အဲ့လိုနေရာမှာပါ ဆရာ။ ဒါပေမဲ့့ ရဲ့ အကျိတ်က မမြင်ရပါဘူး။ အဲ့လိုအကျိတ်လဲအပြင်မထွက်နေပါဘူးရှင့်။ ဂုတ်ရဲ့ အကြောအပေါ်မှာ အကျိတ်လက်တဆစ်လောက်ဖြစ်နေတာပါ။ နာကျင်မှုလဲမရှိပါဘူးရှင့်။ ကင်ဆာဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ပါဆရာ။
လည်ပင်းကဖြစ်တဲ့အကျိတ် ဘယ်နှစ်မျိူး ရှိပါသလဲဆရာ။ လည်ပင်းက အကြောအတိုင်း တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တန်းစီပြီးထွက်တဲ့အကျိတ်က ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေတာလဲ။ ဆေးသောက်တာနဲ့ ပျောက်နိုင်ပါသလား။
ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ၊ ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီ၊ တခြားဘာလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ ဓါတ်မှန်၊ နာ-မနာ၊ လူပိန်လာ-မလာ၊ သိချင်ပါသေးတယ်။ မတူတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိလို့ပါ။ တက်စေ့ရောင်တာ၊ တီဘီ၊ ကင်ဆာ အတော် မတူတာတွေ။
ဖြစ်တာက ညီမလေးတယောက်ပါဆရာ။ သူက နဂိုပိန်တာပါ။ သိပ်မကြာသေးဘူးထင်တာပဲ။ သူကခုမှ ကိုယ်ကိုယ်ကို စမ်းမိတာတဲ့၊ အလုံးက မမြင်ရပါဘူး။ လက်နဲ့ စမ်းကြည့်မှ သိတာပါ။ လည်ပင်း အကျိတ် ဟုတ်-မဟုတ် ဆိုတာလည်း မသိပါဘူး။ လူက ပိန်ရင် လည်ပင်းက အရိုးကြီးပေါ်နေတယ်လေနော်။ အဲဒီပေါ်နေတဲ့ အရိုးနဲ့ကပ်လျှက် အပေါ်ဘက် လည်ပင်း ချိုင့်နေတဲ့ နေရာမှာရှိတယ်။ အလုံးက ညာဘက်မှာပါ။ နာလည်း မနာဘူးတဲ့။ ဆေးခန်းလည်း မသွားရသေးပါဘူး။ ဆေးခန်းမှာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး သေသေချာချာ စမ်သပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် ဆရာ၊။ အသက်က ၂၈နှစ် ပြည့်တော့မှာပါ။ ချောင်းဆိုးနေတာ ၃၊ ၄ ပတ်ရှိပြီဆရာ။ ချောင်းဆိုးတာ ဆေးခန်း သွားပြီးပါပြီ။ အခု နဲနဲဆိုးပါသေးတယ်။ ဆရာပြောတဲ့ အခြား လက္ခဏာတော့ မတွေ့သေးပါဘူးဆရာ။
မဖြေခင် ထပ် (ထပ်) ပြောပါရစေ။ မေးတဲ့သူတွေက ကိုယ့်နာမည်ကို အဖျားဆွတ်ပြောသလို ထည့်ရေးတာ နားလည်ရ ခက်စေပါတယ်။ ပဌမမေးခွန်းမှာ့့ တွေက မေးတဲ့သူက သူ့နာမည်လို့ ယူဆရတာကို ထည့်ရေးထားပါတယ်။ အဖြေစာထဲက အင်္ဂလိပ်စာလုံလေးတွေကို ကျော်ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ဆောရီး။
လူတိုင်းမှာ Lymphatic system ဆိုတဲ့ သွေးပြန်ရည်စနစ်ရှိတယ်။ Lymph Nodes အစေ့လေးတွေ တခုနဲ့တခု အကြောတွေနဲ့ ဆက်နေတာ။ တကိုယ်လုံးလိုလိုမှာ ရှိတာ။ စုနေတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်။ လည်ပင်းက တခုပေါ့။ မေးအောက်၊ ချိုင်းနဲ့ ပေါင်ရင်းတွေမှာလည်း ရှိတယ်။ ဒီစနစ်က Immune system ခံနိုင်အားအတွက် အသုံးကျတယ်။ မသင့်တာတခုခုဖြစ်ရင် နောက် ဒါမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုးပြောတာ။ အစေ့တခုခု ရောင်နေတယ်ဆိုတာ ရောဂါတခုခု ရှိနေပြီးသားလို့ သိနိုင်တယ်။
သူ့အရည် Lymph ထဲမှာ သွေးဖြူဥတွေ၊ အူကလာတဲ့ Chyle အရည် နဲ့ သွေးနီဥ နည်းနည်းပါတယ်။ ရောဂါရနေရင် သူ့ထဲမှာ ပိုးတွေနဲ့ တခြားပစ္စည်း Antigens (အင်တီဂျင်) တွေပါနေလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သွေးပြန်ကြောထဲ ဝင်သွားကြတယ်။ Spleen ဘေလုံးဟာလည်း ဒါမျိုးဘဲ။ Tonsils အာသီးလည်း မထူးဘူး။ အစေ့တွေ အထဲမှာ WBC သွေးဖြဥတွေက ရောဂါပိုးတွေကိုပြီးစေနိုင်တဲ့ Antibodies ခံနိုင်စွမ်း ထုတ်ပေးတယ်။
ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းမှာ လက္မဝက်လောက်သာရှိတဲ့ တက်စေ့လေးတွေ ရှိနေတာတော့ ကိစ္စမရှိပါ။ အအေးမိ-နှာစေးလို ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဗက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ပင်းနာ၊ အာသီးရောင်၊ အနာဖြစ်တာနဲ့ တွဲနေရင် ပဋိဇီဝဆေး အရင်ဆုံးပေးမယ်။ နာတာ-ရောင်တာ သက်သာအောင်လည်း Ibuprofen, Paracetamol ဆေး ပေးနိုင်တယ်။ ၂ ပါတ်လောက်မှာ ပြန်ကောင်းသွားမယ်။ ဆက်မကြီးဘဲ သေးသေးသွားလိမ့်မယ်။ ရောင်-နာ-ကြီး နေတဲ့ တက်စေ့က အထဲမှာပြည်တည်ရင်တော့ Abscess ပြည်တည်နာဖြစ်လို့ခွဲရမှာပေါ့။
တက်စေ့ကြီးနေယုံကတော့ ပြဿနာမဟုတ်သေးပါ။ ၂ ပါတ်ကျော်လာပြီ၊ လူကပိန်လာတယ်၊ ညပိုင်း ချွေးထွက်တယ်၊ အားယုတ်လာတယ်၊ ငွေ့ငွေ့အဖျားတာရှည်မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ တီဘီအကျိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြီးနေတဲ့အစေ့က မာနေတယ်၊ ကြီးလာတာလည်း မြန်မယ်၊ သူ့အနားက အရေပြားဖြစ်ဖြစ် အောက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ကပ်နေလို့ ရွေ့-လှုပ် မရရင်၊ အစေ့ အထက်က အရေပြားက နီ-နာလာရင်၊ လည်ပင်းအခြေ၊ Collar bone ညှပ်ရိုးနား ကပ်နေရင်၊ (အခုမေးသူလို)၊ ဆေးစစ်ရလိမ့်မယ်။ ကင်ဆာကိုသံသယရှိရမယ်။
အစေ့တွေ ဘာလို့ကြီးလာသလဲ။ ရောဂါပိုးဝင်တာ။ ကင်ဆာ၊ Lymphoma, Leukemia သွေးကင်ဆာ။ စုံအောင်သာ ရေးပြတာပါ။ မေးတဲ့သူအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဓါတ်ပုံထဲကသူမှာ ရောဂါပိုးဝင်တာသာ ဖြစ်မှာပါ။ ပိုးအမျိုးအစားကိုတော့ သိဘို့ လိုလာပြီ။ အာဂန္တုလား၊ နာတာရှည်တည်းခိုနေတဲ့ရောဂါလား ခွဲခြားရတယ်။
အာဂန္တုတွေက လည်ချောင်းနာ၊ နှာစေး၊ အရေပြားအနာ၊ နဲနဲပြင်းတာတွေက တီဘီ၊ ဖန်းဂတ်စ်၊ ပါရာဆိုက်၊ ရူမတွိုက် အဆစ်နာ၊ Lupus လူးပတ်စ်၊ နောက်ဆုံး HIV ကို ရွေးထုတ်ရမယ်။
ဆေးစစ်တာ သိပ်အလျှင်စလို လုပ်ဘို့ မလိုပါ။ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ရင် အရင်ဆုံး နုတ်ဖြေ စာမေးပွဲ အစစ်ခံရမယ်။ သွေးစစ်တာ၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ၊ CT scan လုပ်တာ၊ နောက်တခါလာရင် Biopsy အသားစ ဖြတ်ထုတ်-စစ်ဆေးတာ လုပ်ချင်လုပ်မယ်။ ဆေးကုဘို့ကတော့ ဓါတ်မှန်အဖြေ၊ သွေးစစ်ချက်၊ အသားစဖြတ်စစ်တဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်။
၁ နှစ် ၈ လအရွယ် ကလေးရဲ့ လည်ပင်းဘေး ဘယ်/ညာမှာ အလုံးကျိတ်သေးသေးလေးရှိနေပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းရွေ့ရွေ့သွားပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ အန္တရာယ်ရှိမရှိ သိပါရစေ။
Lymph node တက်စေ့ရောင်တာဖြစ်တယ်။ အဖြစ်များတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့တနေရာရာမှာ ရောင်ရမ်းတာဖြစ်လို့ တက်စေ့ဆီရောက်ပြီးရောင်တယ်။ သွားနာ၊ လည်ချောင်းနာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေရင်း၊ အနာပေါက်တာ၊ နားကိုက်တာ အစုံကနေဖြစ်တယ်။ ပင်ရင်းနေရာ ရောင်တာပျောက်ပေမဲ့ တက်စေ့က ကျန်နေတတ်တယ်။ ကြာရင် ပျောက်တယ်။ ကျန်နေတာလဲ ရှိတတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်တာတွေက ပိုးသေဆေးနဲ့ အရောင်ကျဆေးပေးတာနဲ့ ပိုးကင်းရှင်းသွားမယ်။ တီဘီ အကျိတ်ရောင်တာလဲရှိတယ်။ အဲတာကတော့ ဆေးစစ်မှသာ ဟုတ်-မဟုတ်သိမယ်။ ဟုတ်လဲ ဆေးသောက် ပျောက်တယ်။ ကလေးက ကိုယ်အလေးချိန်မတက်ရင်၊ ညချွေးထွက်ရင် တီဘီ စစ်သင့်တယ်။
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၄၄နစ်ပါ။ အမျိုးသားအသက်ကတော့ ၄၅နစ်ပါ။ အရင် ၂နစ်က ကလေးကရပြီး ၆ ပတ်နဲ့ ၆ရက်မှာ ဆေးခန်းသွားပြတော့ ကလေးရင်မခုန်လို့သားအိမ်ခြစ်လိုက်ရပါတယ်။ ခု ၂နစ်နေပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ ကလေးရပါတယ်။ ကျွန်မက့့ မှာအလုပ်လုပ်နေတော့ သည်ကသားဖွားအထူးကုနဲ့ပြပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကျွန်မကို အသက် ၄၄မို့ ကလေးအတွက် Down syndrome စစ်ရမယ်ဆိုလို့ Panorama Prenatal Screen test စစ်ရပါတယ်။ အဖြေမကောင်းရင် ကလေးကိုဖျက်ချနိင်တယ်ပြောပါတယ်။ ခုဝမ်းသာစရာအဖြေကကောင်းပါတယ်။ ခုကိုယ်ဝန် ၄လကျော်ထဲရောက်နေပါပြီ။ နောက်လဆိုFA Scan -Obsteric U/S (18-22)week စစ်ရမယ်ပြောပါတယ်။ ခုကျွန်မစိတ်ဆင်းရဲနေတာက ကျွန်မရဲ့အမတွေက အသက်ကြီးမှမွေးလို့ကျွန်မအတွက်ရော ကလးကလည်း မကောင်းနိုင်ဘူး ခုစစ်ထားတာကလည်း မသေချာဘူးဆိုပြီး ကလေးကိုဖျက်ချပါဆိုပြိးပြောနေကြပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။ ဘာဆေးမှလည်း မသောက်ရပါဘူး။ အရက်ဆေးလိပ်လည်းမသောက်ပါဘူး။ အမျိုးသားမှာတော့ ကိုလက်စတော့များလို့ ဆေးသောက်ရတာ ရှိပါတယ်။ ဆရာအကြံပေးပါအုန်း။ ကလေးက အသက်ကြီးရင် မွေးလို့မရဘူးလားရှင်။ သူတို့ပြောနေတာ ဉာဏ်ရည်မမီတာတွေ ပြီးတော့ အော်တစ်ဇင်ကလေးတွေ ရနိူင်တယ်ဆိုပြီး ဖျက်ချခိုင်းနေတယ်ဆရာရယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကလေးမရှိလို့လိုချင်ပါတယ်။ ဖျက်လည်းမချရက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာဆီက အကြံဉာဏ်လေးများ လိုချင်လို့ အီးမေးပို့ပြီးမေးရတာပါ။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါဆရာ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
၂။ ကျမ အသက်က အခု ၄၃ နစ်ပါ။ ခက်တာက လက်ထပ်မဲ့သူက ခုအသက် ၅ဝ ရှိပါပြီ။ သူကသူ့မှာ မျိုးဆက် မရှိတဲ့အတွက် ကျမနဲ့ ကလေးတယောက် ယူချင်ပါတယ်။ ကျမလဲ အသက်က ၄ဝ ကျော်နေပြီဖြစ်လို့ စိတ်မှာ မယူချင်ဘူး။ ကျမ ကြောက်တာက မပြည့်မဲ့ကလေးတွေ မွေးမှာကို ကြောက်တယ်။ နစ်ယောက်လုံးလဲ အသက်ကြီးနေကြပြီ။ တကယ် ကလေး ယူဖြစ်ရင်လဲ ကျမအသက် ၄၄ ကျော်မှ မွေးနိင်မယ်လေ။ အဲဒါ ဖြစ်နိင်-မဖြစ်နိင် ဆရာဆီမှာ မေးကြည့်တာပါ။ ကျမက တနစ် တခါ ကျန်းမာရေး စစ်တဲ့အတွက် သွေးတိုး၊ ဆီချို၊ နှလုံး ဘာရောဂါမှ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ယူဖြစ်ရင်လဲ ဘာတွေ ဆိုးကျိုး ဖြစ်လာနိင်တယ် ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။
သိပ်အစိုးရိမ်မကြီးပါနဲ့။ ဥာဏ်ရည်မမှီ ကလေးက မိဘတွေ အသက်အရွယ် ကြီးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ယောက်ျား အသက် ၅ဝ၊ မိန်းမ ၄၃၊ နှစ်ဦးလုံး ကလေးရနိုင်သေးပါတယ်။ ရာသီလာနေ-မှန်နေရင်ပေါ့။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းနေတဲ့ကလေး မွေးလာတာကို ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ မျိုးဗီဇ ကို လွှဲချနိုင်ပါတယ်။ ရှာလို့ရတဲ့ အကြောင်းခံတွေ ထဲမှာ သန္ခေစရှိခါစမှာ Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးသုံးတာ၊ ဥပမာ Sulfonamide နဲ့ Nitrofurantoin ဆေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေတုံး တချို့ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့တာ၊ ဥပမာ Iodine, Vitamin A, Vitamin A B 2, Vitamin C, Vitamin E နည်းတာ၊ Petroleum ဓါတ်ဆီ အဆိပ်သင့်တာ၊ Fusarium mycotoxin zearalenone အဆိပ်သင့်တာတွေပါတယ်။ သတိပြုဘို့ ကောင်းတာက ဒီအထဲမှာ မိဘ အသက်ကြီးလို့ကြောင့်ဆိုတာ မပါတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတောင် ၆ဝ% လောက်က ဘာလို့ ဖြစ်လဲ မသိရပါ။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ထင်မှတ် လက်ခံတဲ့ အချက်အတိုင်း ဆိုရင် ကံတရားအရ ဖြစ်တာပေါ့။
ခုခေတ်မှာ အသက် ငယ်ငယ်လေးတွေရော ကြီးသူတွေပါ ကိုယ်ဝန်ရသူ တိုးလားနေတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နဲ့ (ဝေးလ်စ်) မှာ စစ်တော့ အသက် ၃ဝ ကျော် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၄၈% ရှိတယ်။ ၁၉၈၆ တုံးက ၂၈% သာ ရှိရာကနေ တိုးလာတာပါ။ အသက် ၃၅-၃၉ အုပ်စုကလဲ တိုးလာတယ်။ ၄ဝ ကျော်က အနှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာ ၁့၁% ကနေ ၃့၅% ဖြစ်လာလို့ ၂ ဆတိုးလာတယ်။
အရင်ကတော့ အသက်ကြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုတာ ကလေးတွေ အများကြီး မွေးထားပြီးတဲ့သူကို ပြောကြပေမဲ့ အခုခေတ်မှာ အသက်သာ နဲနဲကြီးပေမဲ့ ကလေးမွေးမများ သေးသူတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အမှန်က ကလေးများများ မွေးသူတွေသာ အခက်အခဲတွေ ပိုကြုံလေ့ရှိတာပါ။ ခေတ်အမျိုးသမီးများဟာ ဗဟုသုတရော အာဟာရပါ ပိုပြည့်ဝ ကြံ့ခိုင်နေတာ များလာတယ်။ အရွယ်ရလာသူတွေဟာ သူ့တို့ ကိုယ်ခန္ခာကို ပိုသိကြတယ်။ ဖြစ်လာမှာကို ခံနိုင်ရည် ပိုရှိကြတယ်။ ပိုလွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ အမှိခို နည်းတတ်ကြတယ်။ အသက် ပိုရလာလို့ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုစတာတွေ မရှိဘို့သာ အရေးကြီးတာပါ။
တခုကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးလာမဲ့ ကလေးဟာ ချို့ယွင်းတာမျိုးက ငယ်သူတွေထက်တော့ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ စောစောက သုတေသနကဘဲ ပြောတယ်၊ ၃၅-၃၉ အတွင်း ၅ဝဝ မှာ ၁ ယောက် အဲလိုဖြစ်ရင်၊ ၄ဝ-၄၅ အတွင်းတွေက ၂၅ဝ မှာ ၁ ယောက် ဖြစ်တယ်။ ၄၅ ကျော်ရင် ၇ဝ မှာ ၁ ယောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Maternal serum screening နဲ့ တခြား စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်သင့်ကြတယ်။ Chorionic villus sampling ဒါမှမဟုတ် Amniocentesis စမ်းနည်းတွေ ပြောတာပါ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလို စစ်လို့ ကြိုသိရရင် ကိုယ်ဝန်ကို ရပ်ပြစ်နိုင်တယ်။
အသက် ၄ဝ ကျော်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ကလေး အသေမွေးနှုံး Stillbirth များတတ်သေးတယ်။ ၂ဝ-၃၉ အတွင်းမှာ လူ ၁ဝဝဝ ထဲက ၅-၆ ယောက်၊ ၄ဝ ကျော်ရင် ၉ ယောက်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို တခြား ကိုယ်ဝန်တွေထက် ANC မမွေးမီ စောင့်ရှောက်ခြင်း ပိုလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက လွဲရင် ကလေးတွေ အားလုံး ကျန်းမာကြပါတယ်။
အသက်ကြီးသူတွေကို မွေးတဲ့အခါမှာလည်း ပိုဂရုစိုက်စရာ လိုကြပါတယ်။ ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေကို Induced labour မွေးစေအောင် ကူညီလုပ်ပေးခြင်း၊ Epidural ခါးထုံဆေးနဲ့ မွေးပေးခြင်း၊ Oxytocin ညှစ်အားကောင်းဆေးသွင်း မွေးခြင်း၊ Forceps delivery ညှပ်ဆွဲ မွေးပေးခြင်း၊ Caesareans ဗိုက်ခွဲမွေးပေးခြင်းတွေ ပြောတာပါ။ အမှန်က ဆရာဝန်တွေက Risk မယူခြင်ကြတာလည်း ပါနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မိခင်လောင်းရော ဆရာဝန်-ဆရာမတွေပါ Stress မများဘဲ၊ သိပ်အစိုးရိမ်လည်း မကြီးသင့်ကြဘူး။
• အသက်ကြီးမိခင်တွေကနေ မွေးတဲ့ကလေးမှာ Autism ဆိုတဲ့မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ရှိတ်တာ များပြီ၊ အသက်ကြီး ဖခင်ရဲ့ဇနီးဟာ အသက် ၃ဝ ထက်ငယ်နေရင် မွေးလဲတဲ့ကလေးတွေမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိတာ တခြားစုံတွဲတွေထက် ပိုတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေ့ ပြောနေပါတယ်။ သူများတွေထက်ပိုတယ်ဆိုတာ အဲဘဲမလွဲမသွေမွေးမယ်လို့ဆိုတာ မဟုတ်ပါ။
• ဒီက အမေရိကား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ၁၉၉ဝ တုံးက Autism ရောဂါရှိနေတဲ့ ကလေးပေါင်း ၁၂၁၅၉ ယောက်ကို လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မွေးလူနာပေါင်း ၅ သန်းထဲကတွေ့ရှိရတာပါ။
• ဒိအရင်လေ့လာမှုအရ ဖခင်က အသက်ကြီးလေလေ အဖြစ်များလေလေ။ အုတွေ့ရှိချက်အရ ဖအေက အသက် ၄ဝ ကျော်၊ မအေက အသက် ၃ဝ ကျော်တွေမှာ ငယ်ရွယ်သူဖခင်တွေထက် ၅၉% ပိုတာတွေ့ရတယ်။ မိခင်က ၃ဝ ကျော်၊ သူ့ယောက်ျားက ၄ဝ ကျော်ဆိုရင် ၁၃% သာပိုတယ်။
• မိခင်အသက် ၅ နှစ်ပိုကြီးလေလေ ဖြစ်နိုင်ချေ ၁၈% တိုးတယ်။ အသက် ၄ဝ ရှိမခင်တွေဟာ ၂ဝ ကျော်တွေထက် ၂ ဆ ပိုတယ်။ ၃၅ နှစ်အောက်တွေထက် ၇၇% ပိုတယ်။
• တခုသိထားရတာက စမ်းသပ်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အဲဒီကာလမှာ အသက် ၄ဝ ရောက်ပြီးမှ ကလေးမွေးလာကြတာ ပိုများလာတာမို့ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို ကာလတိုင်းအတွက် အတည်ယူလို့မသင့်ဘူး။
• ဒီမွေးရာပါရောဂါက မိခင်အသက်မရွေးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• လေ့လာမှု ၂ ခုကိုယှဉ်လိုက်ရင် ဖအေ့အသက်ကြီးတာက မအေအသက်ကြီးတာထက် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
• အစ္စရေးလ်မှာလုပ်တဲ့ လေ့လာချက်မှာတော့ အသက် ၃ဝ အောက်ဖခင်တွေထက် အသက် ၄ဝ ကျော် ဖခင်တွေကနေ ၅ ဆ ပိုဖြစ်စေတာ တွေ့ရတယ်။ မိခင်တွေကို ပိုပြီးထောက်မပြကြဘို့ သတိပေးချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
• ၂ဝ၁ဝ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတခုအရ အမေရိကားမှာ ကလေးမွေးလာတဲ့ မိခင်တွေရဲ့အသက်ဟာ အရင် အနှစ် ၂ဝ ကနဲ့စာရင် အသက်ပိုကြီးတာတွေ့ရတယ်။ ၁၉၉ဝ တုံးကဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်မိခင်တွေက ၁၃%၊ အသက် ၃၅ ကျော်တွေ့ ၉% သာရှိခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၈ ရောက်တော့ ဆယ်ကျော်သက်မိခင်တွေက ၁ဝ%သာရှိပြီး ၃၅ နှစ်ကျော် မိခင်တွေက ၁၄% ရှိလာတယ်။ အရင်ကဆိုရင် ကလေးလာမွေးပေမဲ့ လက်မထပ်သူက ၃၁% ရှိခဲ့ရာကနေ နောက်မှာ ၂၈% သာရှိလာတယ်။
Tony Randall ရုပ်ရှင်မင်းသား (တိုနီ ရန်းဒဲလ်) ရဲ့ ပထမဆုံးကလေးကို သူ့အသက် ၇၇ နှစ်မှာရတယ်။ Larry King (လယ်ရီ ကင်း) ခေါ်တဲ့ CNN ကနာမည်ကြီးပင်တိုင်ထုတ်လွှင့်သူဟာ သူ့ရဲ့ သတ္တမမြောက်ဇနီးနဲ့ ကလေးမွေးတော့ သူ့အသက်က ၆၆ နှစ်ရှိပြီ။ Mary Elizabeth Anania Edwards နာမည်ကြီးရှေ့နေ (အဲလိဇဗက် အက်ဒ်ဝပ်) ဟာ အသက် ၅ဝ မှာကလေးမွေးတယ်။
Older Parenthood အသက်ကြီးမှ ကလေးရရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/older-parenthood.html
Young father ယောက်ျားက အသက်ငယ်နေရင် ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ ကလေး မွေးတတ်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/young-father.html
ခန္ဓာကိုယ်​အတွက်​ မရှိမဖြစ်​လို​အပ်​​သော ဓာတ်​များစွာရှိ​နေ​ပေမဲ့ သံဓာတ်​ သည်​လည်း အဓိကကျပါသည်​ ။
သံဓာတ်​အားနည်းသည့်​အခါ ဌင်းသံဓာတ်​အားနည်း​နေခြင်း​ကြောင့်​​သွေးတွင်းဟီမိုဂလိုဘင်​ပါ အားနည်းဖြစ်​​ပေါ်လာသည့်​အတွက်​ ခန္ဓာကိုယ်​အတွက်​ ​အောက်​စီဂျင်​​လျော့နည်းခြင်းဖြစ်​​ပေါ်လာရပါသည်​ ။
​အောက်​စီဂျင်​​လျော့နည်းလာခြင်း​ကြောင့်​ ဦး​နှောက်​မကြည်​မလင်​ဖြစ်​​ပေါ်လာခြင်း ၊ အားအင်​နည်း နွမ်းလျဖြစ်​ခြင်း ​မောပမ်း​လာခြင်း စိတ်​မကြည်​လင်​ခြင်း အစရှိသည့်​တို့ ဖြစ်​​ပေါ်ခံစားရတက်​ပါသည်​ ။
အမျိုးသားများထက်​ အမျိုးသမီးများတွင်​ သံဓာတ်​​လျှော့နည်းဖြစ်​​ပေါ်မှု့များသည့်​အတွက်​ ပိုမိုလိုအပ်​​သော သံဓာတ်​ဖြစ်​ပါသည်​ ။ လစဉ်​တိုင်​အမျိုးသမီးများတွင် ​အပျိုအရွယ်​ဝင်​စချိန်​မှစတင်​ခါ ဓမ္မတာလာသည့်​ ​သွေးအတွက်​​ကြောင့်​ ဌင်းသံဓာတ်​ပိုမိုနည်းပါးတက်ပြီး ​ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သံဓာတ်ပမာဏကို သာမန်​အချိန်​ထက်​ များစွာလိုအပ်​ပါသည်​ ။
သံဓာတ်​ပါဝင်​မူ့များသည့်​ အမဲအသည်း ၊ နီမြန်း​သောအသား ၊ ကြက်​သားရင်​ အသားဖြစ်ပြီး ပဲနီ​လေး ၊ ​ထောပတ်​ပဲ တိုဟူး ၊ အာလူး နှင့်​ ပန်း​ဂေါ်ဖီ ကန်​စွန်းရွက်​
စားသင့်​သလို အခွံမာ​သောအ​စေ့အဆန်​နှင့်​ ​ဖရုံ​အ​စေ့
မြေပဲ ၊ အသီးအရွက်​အ​နေဖြင့်​ ဟင်းနုနယ်ရွက်​တွင်​ သံဓာတ်​များပြီး ကန်​စွန်​ရွက်တို့တွင်​ပမာဏအနည်းငယ်​ပါဝင်​သဖြင့်​ စား​သောက်​သင့်​ပါသည်​ ။
သံဓာတ်​နည်းပါးသည်​အတွက်​ သံဓာတ်​ပါဝင်​နှုန်းများ​သော အသားများစားခြင်း အရွက်​များစားခြင်း သာမန်​​လူအ​နေဖြင့်​ တည်​​ပေမဲ့
အသည်း​ရောဂါ အသည်းပိုး​ရောဂါဖြစ်​​နေပါက သံဓာတ်​များ​သော အစားအစာများ ​ရှောင်​ရှားရပါမည်​ ။
အသည်း​ဝေဒနာခံစားဖြစ်​​ပေါ်​နေသည့်​အတွက်​ သံဓာတ်​ပမာဏများ​သော​ကြောင့်​ အသည်းပိုမို ပျက်​စီး​စေသည့်​အတွက်​ အထူးဂရုပြု့သင့်​ပါသည်​ ။ အသည်း​ရောဂါနှင့် ​စီပိုး ရှိ​နေပါက နီ​သောအသားနှင့်​ အသည်း​ ကလီစာများ မစားသင့်​သလို သံဓာတ်​ပါဝင်​များ​သော အရွက်​များ လွန်​ကဲစား​သောက်​ခြင်းကို ​ရှောင်​သင့့်ပါသည်​ ။
ဥတုရာသီပြောင်းလဲလာသည့် အချိန်ခါမျိုးတွင် သတိမေ့လျော့စွာ သွားလာနေထိုင်လိုက်မည့်ဆိုပါက နေမကောင်းဖျားနာတက်သည့် စပ်ကူးမတ်ကူးဥတုအပြောင်းအလဲ အချိန်ကာလဖြစ်နေပါသည် ။ ပူအိုက်သည့်ဟု မိမိထင်မိပေမဲ့ ညအချိန်အခါနှင့် မနက်အချိန်ခါတွင် အေးလာတက်ပါသည် ။ အဲလိုအချိန်တွင် နွေးထွေးခြင်း မရှိလိုက်ပါက အအေးပတ်ဖျားနာတက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည် ။
အအေးပတ်ခြင်းကြောင့် နေထိုင်မှု့ လေးလံနေခြင်း ၊ အာခေါင်းများ ခြောက်ကပ်ခြင်း ၊ အကြောတက်ခြင်း ၊ သွေးတိုးခြင်း နှင့်အတူ အစာမကြေ ဖြစ်တက်ပါသည် ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် နှာမွှန် ချောင်းဆိုးခြင်းပါ ဖြစ်ပေါ်လာတက်သည်ကို အထူးသတိချပ်စေချင်ပါသည် ။
သာမန်ဖျားနာခြင်းလို ဆိုချင်ပေမဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် ဥတုအပြောင်းကို သတိမမူမိသည့် အတွက် ဖျားနာတက်သည်ကို အသိသတိရှိစေချင်ပါသည် ။
ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးတွေမှာ ဥတုသည့် အေးလာတက်ခြင်းကြောင့် အပြင်သို့ သွားလာတက်ပါက အအေးမမိစေရန် ဝတ်စားနေထိုင်သင့်သည်ကိုလည်း ပြောလိုပါသည် ။
ယခုလို ဥတုအပြောင်းအချိန်ကာတွင် ရက်ရှည်ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်း မဟုတ်ပေမဲ့ သာမန်ဖျားနာတက်ခြင်းကို မဖြစ်ပေါ် မခံစားမိစေရန်အတွက် နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင် ဝတ်ဆင်ပြီး သတိရှိစွာဖြင့် သွားလာနေထိုင်စေချင်ပါသည် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကလေးမီးဖွားပြီးစကို ''မီးနေသည်'' လို့ခေါ်ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ယောက်အတွက် ရင်သွေးရတနာမွေးဖွားခြင်းဟာ ဂုဏ်ယူကြည်နူးစရာအတိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အာရုံခံစားမှုသက်တောင့်သက်သာ မရှိကြတာ ဓမ္မတာပါ။
သားဖွားပြီးတဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဟိုမုန်းတွေကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲ သွားတာကြောင့် စိတ်မပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၊ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) အလွန်အကျွံစားသောက်လိုစိတ် ပြင်းပြခြင်း၊ အလိုလိုဒေါသထွက် သည်းခံချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ နောင်တရငိုကြွေးခြင်းစတဲ့ စိတ်ကျရောဂါကို အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ထိုခံစားမှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ (ခင်ပွန်းနဲ့မိသားစုဝင်များက ထိုကာလတိုလေးမှာ နားလည်ဖေးမခြင်းဖြင့် မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာ ရေးအတွက် ကူညီပေးသင့်ပါတယ်)
မိခင်၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ မွေးဖွားပြီးပြီးချင်း (သို့မဟုတ်) မကြာမီအတွင်းမှာပင် မိခင်နို့အုံမှ နို့ဦးရည်များစတင်ထွက်လာပါပြီ။ ထိုနို့ဦးရည်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်အများဆုံး ပါဝင်နေတာကြောင့် ရင်သွေးငယ်အတွက် ပဋိဇီဝဆေးသဖွယ်အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ မွေးဖွားပြီးနောက် ၃-ရက်၎-ရက်လောက် အကြာမှာ နို့ထွက်အားနှုန်းကောင်းလာပြီဖြစ်ရာ ထိုအချိန်မှစပြီးနို့အုံယောင်ရမ်းလာပြီး၊ မာကျောလာခြင်းနှင့် အတူ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်မှုတွေပါ ဆက်တိုက်ခံစားလာရပါတယ်။ ထိုဝေဒနာအတွက် သန့်စင်တဲ့ လက်ကိုင်ပ၀ါကို ရေနွေးနွေးမှာစိမ်ညှစ်၍ နို့အုံကိုအသာအယာဖိချေပေးခြင်း၊ ရင်သားတစ်စုံကို တစ်လှည့်စီ ကလေးငယ်အား ကြိမ်ဖန်များစွာနို့တိုက်ပေးခြင်း၊ နို့ရည်မလိုက်သူများအတွက် နို့ရည်စုပ်ခွက်(ကိရိယာ)ကို အသုံးပြု၍ နို့ရည်စုပ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် မီးနေသည်၏ နာကျင်မှုကိုပြေပျောက်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရက်အနည်း ငယ်အတွင်းမှာပင် မိခင်ရောရင်သွေးငယ်ပါ နို့ချိုတိုက်ကျွေးမှုကျင့်သားရသွားပါလိမ့်မယ်။ မီးနေသည်ရဲ့ရင်သား ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်းကလို တင်းတင်းရင်းရင်းမရှိနိုင်တော့ပေမယ့် စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ကလေးနို့ပြတ်သွားတဲ့ အခါမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ရင်သားတွဲကျမှုကိုသက်သာစေကာ မူလရင်သားအသွင်နီးပါးပြန်လည်ရယူ နိုင်ပါတယ်။
ကလေးမီးဖွားပြီးချိန်မှစပြီး ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းနှင့် ၀မ်းဗိုက်အောက်ခြေပိုင်းတို့ဟာ ပျော့စိနေပြီး၊ အတွန့်ကြေ ကြောင်းများဖြင့် ရှုံ့တွနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဗိုက်ချပ်၊ ဗိုက်စည်းတွေသုံးနိုင် သလို၊ Past-Natal Exercise (ခေါ်) မီးနေသည်များလုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းကတွဲကျနေတဲ့ ဗိုက်ကြွက် သားများကို ပြန်လည်တင်းမာသန်စွမ်းလာစေမှာပါ။ ချုပ်ရိုးအနာကျက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း ကို ပြေပျောက်စေတဲ့ လိမ်းဆေးတွေလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်မခွဲဘဲသဘာဝနည်းဖြင့် မွေးဖွားသူများဟာမွေးဖွားပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ သွေး များများဆင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့အတွက် မစိုးထိတ်ပါနှင့်။ သားအိမ်ဟာ ၆-ပတ် (၄၅ ရက်ခန့်)တာ ကာလ အတွင်း ပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပျမ်းမျှရက်သတ္တပတ် ၂-ပတ်မှ ၆-ပတ်အထိ သွေးဆင်းတတ်ပြီး၊ သွေးအရောင်လျော့လာတာနဲ့အမျှ သွေးဆင်းခြင်းပြီးဆုံးလာပါပြီ။ ထိုသို့ သွေးဆင်းခြင်း အတွက် မီးဖွားပြီးအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်း(ခေါ်) Maternity Pad ကိုသာသုံးပါ။ ရာသီသွေးထိန်း အတောင့်(ခေါ်) Tampons ကိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့။
ဗိုက်မခွဲဘဲသဘာဝနည်းဖြင့် မွေးဖွားသူများမှာ မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့ပြီး ပြန်ချုပ်ရတာကြောင့် ချုပ်ရိုးကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းအောင် ထားပေးသင့်ပါတယ်။ ဆီးသွားချိန် ချုပ်ရိုးကတင်းပြီး နာလွန်းတဲ့အခါ ရေဇလုံ (သို့မဟုတ်) အင်တုံခွက်သန့်သန့်တစ်ခုထဲသို့ ရေခပ်နွေးနွေးထည့်ပြီး ချုပ်ရိုးနေရာကိုရေစိမ်ပြီး ဒီရေထဲကို ဆီးသွားပေးပါ။ သန့်စင်ခန်းသုံးပြီးတိုင်း၊ ရေချိုးပြီးတိုင်း ချုပ်ရိုးကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပေးပါ။ (အကယ်၍ ဗိုက်ခွဲမွေးထားသူများအနေဖြင့် ဗိုက်ချုပ်ရိုးကိုခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းနေပါစေ)
သားဖွားပြီးနောက် #ရက်သတ္တပတ် ၆-ပတ်အကြာ
မီးနေသည်တိုင်းသားဖွားပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်၆-ပတ်အကြာမှာ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့်မပျက် မကွက် ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သွေး၊ ဆီး၊ ရင်သား၊ ၀မ်းဗိုက်၊ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း အနေအထား များ၊ ချုပ်ရိုးအနာကျက်/မကျက်၊ သားအိမ်အရွယ်အစားနှင့် သားအိမ်အနေအထား ပုံမှန်အခြေအနေ ဖြစ်/မဖြစ် ကို စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီးနေသည်၏ ရုပ်ပိုင်း-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးနိုင်သလို၊ သားဆက်ခြားနည်းဆိုင်ရာ နည်းစံနစ်တို့ဖြင့် လိုအပ်သလို တားဆီးကာကွယ်မှုကို ခံယူထားဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
ပျမ်းမျှမီးနေသည် ၁၀-ဦးမှာ၉-ဦးက မွေးဖွားပြီးတဲ့တိုင်အောင် ကိုယ်အလေးချိန်မလျော့ ဗိုက်လည်း ဆက်၍ ဖောင်းစူနေသေးတာကြောင့် ၁-လခန့်ကြာသည့်တိုင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အင်္ကျီကို ဆက်လက်ဝတ်ဆင် ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရက်သတ္တပတ် ၆-ပတ်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာ သားအိမ်ကပုံမှန် အနေအထား ပြန်ရောက်ရှိတာကြောင့် ဗိုက်စူဖောင်းမနေတော့သလို ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်း မူလအနေ အထားနီးပါး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးစဉ် ကာလဖြစ်တာကြောင့် ပိန်ချင်လို၍ အစာလျော့စား ရွေးချယ်စားခြင်းမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစား များစားခြင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မည့် အစာများရှောင်ခြင်း၊ျါေ ပါတဲ့အချိုရည်များ ရှောင်ခြင်းဖြင့် စားသောက် နည်းမှန်ကန်ပါစေ။ ရင်သွေးငယ်နို့မပြတ်ခင်မှာ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေလုပ်နိုင်သလို နို့ပြတ် ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လိုအပ်သလို ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှဆိုသလို ကျန်းမာနုပျိုစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…..။
ယခုခေတ်ကာလရဲ့ အခြေအနေ ရေပန်းစားမှုမှာလူငယ် (အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ) မျက်နှာကို ဂရုစိုက်အလေးထားပြီး ပြုပြင်လာကြပါတယ်။ မျက်နှာကိုဒီလိုပြုပြင်ကြရာမှာ chemical peeling ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ လူငယ်ရော လူကြီးတွေကြားမှာ တော်တော်လေးရေပန်းစားလာပါတယ်။ chemical peeling ကို အပြင်မှာပြောကြတဲ့ အခေါ်အဝေါ်စကားအသုံးအစွဲဟာ တော်တော်လေးနားရှုပ်ပြီး မျက်စိလည်စရာကောင်းလှ ပါတယ်။ တစ်ချို့က မျက်နှာဆေးချင်လို့ဆိုပြီးပြောကြတယ်၊ တစ်ချို့က မျက်နှာဂျီးချွတ်ချင်လို့ဆိုပြီး လာပြကြ ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ပီလင် pelling လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဘိုလိုအတိုပြောဆိုကြပြန်ပါတယ်။ တစ်ချို့က မေးကြပြန်ပါသေးတယ်၊ အလှပြင်ဆိုင်မှာလုပ်သလိုလား၊ တူသလား၊ ဘာလား၊ ညာလားနဲ့စုံနေတာပါပဲ။ ဒီတော့ အမေးရှိတော့အဖြေရှိရပြန်ပါတယ်။ အလှပြုပြင်ရေး (Beauty Parlar) တွေမှာ လုပ်ကြတဲ့ မျက်နှာဆေးတာတို့၊ မျက်နှာဂျီးချွတ်တာတို့နဲ့နာမည်၊ ခေါ်ဝေါ်ပုံချင်းရောနှောရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့ မတူကြပါဘူး။ နောက်ပြီး ယခင်ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေမှာတော့ chemical peeling ကို ဓါတုဆေးရည်ဖြင့် ပေါင်း တင်ခြင်းလို့ ပြန်ဆိုကြတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို chemical peeling ဆိုတဲ့ စကားစုကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ ဓါတုဆေးရည်ဖြင့် အပေါ်ယံအရေပြားလွှာကို ဖယ်ရှားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါ တယ်။
လူငယ်တွေတော်တော်များများ သိချင်ကြတဲ့အရာပါ။ ရောဂါရှိလို့လုပ်တာလား၊ ရောဂါမရှိတဲ့သူတွေ ကရော ဘာလို့လုပ်တာလဲ စသဖြင့်မေးကြတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာရောဂါဖြစ်လို့လုပ်ရတာရှိသလို၊ မျက်နှာကို ပြုပြင်တဲ့သဘောနဲ့ နုပျိုအောင်လုပ်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ မျက်နှာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်ပအသွင် သဏ္ဍာန်အတွက်ကအရေးကြီးတော့ တော်တော်များများက စိတ်ဝင်တစားနဲ့မေးကြ၊ မြန်းကြ၊ စူးစမ်းသိမြင်ချင် ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပြဿနာတွေကြောင့်မျက်နှာ chemical peeling လုပ်ကြသလဲဆိုရင်တော့ ၀က်ခြံတို့၊ တင်းတိပ်တို့၊ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမည်းစက်၊ အမာရွတ်၊ နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ မျက်နှာပေါ်က မည်းတဲ့ အစက်တွေ၊ နေရောင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရေစတာတွေကို ကုသဖို့၊ ချောမွေ့လှပသွားစေဖို့ စတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် လုပ်တာများပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေ၊ အချိုင့်တွေအတွက် လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ သို့သော် လုပ်ရမယ့် chemical peeling မျိုးအစားတွေကတော့ ရောဂါတစ်ခုခြင်းစီရဲ့ အဆင့်ပေါ်မှာလိုက်ပြီး မတူညီသလို ရောဂါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်မှာလည်း မတူညီနိုင်ကြပါဘူး။
အပေါ်ယံလွှာ (Supreficial typer) အတွက်ဆိုရင် ဂလိုက်ကိုလစ်အက်ဆစ် (Glyclic acid 40-70%) ထွိုင်ကလိုရိုအက်ဆီတစ်အက်ဆစ် Trichloroacetic acid (TCA) 10-30% အယ်လ်ဖာဟိုက်ဒရောစလစ် အက်ဆစ် AHA, စလီစိုင်းလစ်အက်ဆစ် Salicylic acid ထရွက်တင်နွိုင်း Tretinoin solution စတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားဓါတ်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ သို့သော်လည်း ဗဟုသုတအဖြစ် ပဲသိသင့်တာကြောင့် ဒီလောက်လေးပဲဖော်ပြလိုက်တာပါ။ တစ်ကယ်တော့အားလုံးဟာ အရေပြားကိုစားပစ် လိုက်ကြတာပါပဲ။ အက်ဆစ်ပြင်းအားနဲ့အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး အနည်းငယ်စားတာနဲ့ များများစားတာပဲကွာပါ တယ်။
ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ Peeling လုပ်ပြီးနောက်မှာ မျက်နှာဟာအမြဲတမ်း နီနီရဲရဲဖြစ်နေတတ်တာမျိုး၊ အဖုဖုလေးတွေမျက်နှာမှာ ထွက်လာတတ်တဲ့ပြဿနာမျိုး၊ Peeling လုပ်ပြီးနောက်မှာမျက်နှာဟာအသားရောင် မညီညာတဲ့ပြဿနာမျိုး၊ အရေပြားချောမွေ့မှုမညီညာတဲ့ ပြဿနာမျိုး၊ ပိုးဝင်ပြီးအမာရွတ်ထင်ကျန်တတ်တဲ့ ပြဿနာမျိုးစတာတွေတော့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ ရေယုန်ပေါက်နေရင်၊ မျက်နှာမှာရေယုန်ပေါက်နေရင် facial skin peeling မလုပ်ရပါဘူး။ ရေယုန်ပေါက်ဖူးတဲ့ သမိုင်ကြောင်းရှိခဲ့ရင်တောင်မှ ရေယုန်အတွက်ရေယုံဆေးကိုကြိုတင် သောက်ပြီးကာကွယ်ထားရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ peeling လုပ်ရာမှာသုံးတဲ့အက်ဆစ်တွေကြောင့် မျက်နှာမှာပေါက်ဖူးခဲ့တဲ့ ရေယုံဗိုင်းရပ်ပိုးဟာ အနှိုးဆွခံရပြီးပြန်ထွက်လာတတ်လို့ပါ။
Peeling လုပ်ပြီးတဲ့အသားအရေဟာ နုနယ်တဲ့အလွှာသစ်ဖြစ်တာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒဏ်ကို သိပ်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့အရေပြားနုနုလေးကို သေသေချာချာဂရုတစိုက်ထိမ်းသိမ်းရပါလိမ့် မယ်။ Skin Care လုပ်ရမယ်ပေါ့။ နေရောင်နဲ့လည်းထိတွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်နေကာအဆီတွေ လိမ်းရပါ့မယ်။ ညပိုင်းမှာ အသားအရေခြောက်သွေ့မသွားရန် Moisturizer ကိုလိမ်းပေးရပါမယ်။ မျက်နှာရဲ လာရင် ရေခဲကပ်ပေးရပါမယ်။ ရေခဲကပ်လို့ နီရဲတာလျှော့သွားရင် Mostruizer လိမ်းပေးရပါမယ်။ တစ်ချို့လိမ်း ဆေးတွေကိုလည်း ရပ်နားသင့်ရပ်နားထားရပါမယ်။ ပီလင်လုပ်ပြီးရင် အရေပြားကို ဘယ်လိုထိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ Post Peeling Skin Care ကို ရေးတာရေးရတယ် တကယ်တော့ Peeling လုပ်တဲ့ အရေပြားကိုအထူးကု ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင်က Peeling လုပ်ပြီးရင်ဘာတွေလိမ်းရမယ်၊ ဘာတွေရှောင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုနေရမယ် စတာတွေကိုပီလင်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ ညွှန်ကြားလိုက်ကြပါတယ်။
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် မေးခွန်းလေးကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မ အသက် ၂၅ အပျိုပါရှင့်။ မျက်စိနားမှာ ငါးမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့ အဖုလေးတွေ ၃လုံးလောက် ပေါက်နေပါတယ် ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့လည်း အဲ့ဒါတွေက လိမ်းဆေးမရှိဘူး လေဆာနဲ့ပစ်မှ ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့် ပြီးတော့ အဲ့ဒီအလုံးတွေက ပွားတတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ မျက်လုံးနားဆိုတော့ လေဆာပစ်ရင် ထိခိုက်မိမှာ စိုးလို့ပါရှင့်။ လိမ်းဆေးရှိရင်လည်း ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။ အလုံးတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ပုံနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
၂။ ကျွန်မအသက်က ၂၇ ပါဆရာ။ ကျန်းမာရေးလဲကောင်းပါတယ်ဆရာ။ အိမ်ထောင်လဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၁၅ နစ်လောက်ကစပြီး မျက်လုံးအောက်မာ ဝက်ခြံလိုအဖုသေးသေးလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ ဝက်ခြံလိုလဲညှစ်လို့ မရပါဘူးဆရာ။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အဖုလေးတွေ ပိုပိုများလာလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးသုံးရမလဲ ညွှန်ပြပေးပါအုန်းဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၃။ ဆရာ သမီးမျက်မှာ နှာခေါင်းဘေး မျက်လုံးအောက်မှာ ဗျုတ်ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဖုလေးတွေ အများကြီးပါ။ မနက်အိပ်ယာနိုးချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ နေ့လည်ကစပြီး အရမ်း သိသာပါတယ်။ အဲဒီ အဖုလေးတွေကို ကုလို့ရနိုင်ပါလား။ တချို့က အဲဒါကို ဆားဝက်ခြံလို့ပြောပြီး၊ တချို့က အဆီဖုလို့ ပြောပါတယ်။ မျက်နှာအရေပြား ချောချင်ပါတယ်။ ကုလို့ရနိုင်ပါလားဆရာ။ ဖြေကြားပေးပါ။
၄။ ဆရာ ကျွန်တော့ မျက်နှာ ပါးနှစ်ဖက်မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်နေတာကြာပါပြီ။ ဝက်ခြံဆိုပေမဲ့ ရိုးရိုးဝက်ခြံလိုမျိုး ရောင်တာ မှဲ့တာ နာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဆားဝက်ခြံလို့ပဲ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ စမ်းကြည့်ရင် အစေ့လေးတွေလိုမျိုးပဲ။ မှဲ့ပြီးတော့လဲ ရောင်မလာဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ။ ညှစ်လိုက်မှ အဖြူအစံလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ မညှစ်ရင် ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ကျန်နေပါတယ်။ မျက်နှာကလဲ ကိုင်လိုက်ရင် အခဲလိုမျိုးကြီးပဲ။ ကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ရင် သေချာသစ်ပါတယ်။ လက်နဲ့လဲ မကိုင်ပါဘူး။ Cosmetic တွေသုံးပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲ့ဒါဘယ်လို ပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာလို့ အလိုမျိုး ဖြစ်တာရယ် ရိုးရိုးဝက်ခြံနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။
အလုံး-အကြိတ်-အနာအဆာ တခုခုတွေ့ရင် ပဌမဆုံး ခွဲခြားရမှာက ကင်ဆာလား ကင်ဆာမဟုတ်တာလား။ Seborrheic Keratosis ဆားဝက်ခြံက ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ Acne ဝက်ခြံနဲ့ ဆင်တယ်။ မျက်နှာမှာ အများဆုံး ဖြစ်တယ်။ စုံးမကြီး မျက်နှာမှာ ရုပ်ဆိုးအောင် အဖုအလုံးတွေ လုပ်ပေးထားတာ ဒါမျိုးပါဘဲ။ ဒီအဖုလေးတွေက တခုခု လာကပ်နေသလို ကြည့်တဲ့လူက လက်နဲ့ ဖယ်ထုတ်ချင်စရာ ကောင်းလှတယ်။ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ဆုံးလွှာ Epidermis ကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကြွက်နို့လို အရေပြားအတွင်းထဲ မရောက်ဘူး။ နဲနဲကြမ်းတာနဲ့ မကြမ်းတာမျိုးရှိတယ်။ မကြမ်းရင် အစေ့လေးတွေ လာကပ်နေသလို ဘေးက အရေပြား အကောင်းထက် နဲနဲ အရောင်ရင့်နေမယ်။ မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင် ပုလဲလုံးလေးတွေလိုနေတယ်။ တခါတခါ ယားတယ်။ ကြာလာရင်ပေါ့။ ဆွရင်-ဆိတ်ရင် ရဲလာလိမ့်မယ်။ များသွားရင်တော့ သွေးထွက်မှာပေါ့။
ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒီအတိုင်းသာထားပါ။ နဲနဲကြီးလာချင်လာမယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လှချင်လို့ ရှင်းချင်ရင် Liquid Nitrogen ဆိုတဲ့အရည်နဲ့ အေးခဲအောင်လုပ်ပေးတယ်။ မီးလောင်ဖုလိုမျိုး အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးမှ နဲနဲကြာမှ အနာကျက်လာမယ်။ အနာဖြစ်ရင် အနာရွတ်ကြီးတတ်သူများ မျက်နှာမှာဆို ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး။ တချို့လူတွေမှာ ဘာအနာဖြစ်ဖြစ် Keloids အနာရွက်သီး ဖြစ်တတ်တယ်။
နောက်တနည်းက ရိတ်ပြစ်တာ။ Flexible razor blade သုံးသင့်တယ်။ လက်မလွန်စေနဲ့။ ရိတ်ပြီးရင် Aluminum chloride or Silver nitrate ဆေးလိမ်းပေးပါ။ သွေးမထွက်စေဘူး။ Silver nitrate ကညိုမဲမဲမို့ အစမှာ ညိုနေအုံးမယ်။ နောက်ပျောက်သွားမယ်။ Aluminum chloride ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့။ Light electrocautery လျှပ်စစ်နဲ့ လောင်စေတဲ့နည်းလည်း သုံးပါတယ်။
• (လက်တ-အက်စစ်) ပါတဲ့လိမ်းဆေး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။
Seborrhoea (Seborrhea) အရေပြားမျာ အဆီများရာကနေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ဖြစ်တယ်။ အများစဟြာ အခြခံရောဂါမရှိကြပါ။ ရှားရှားပါးပါး Parkinson's disease ဒါမှမဟုတ် Acromegaly ရောဂါရှိတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ Androgens ဟော်မုန်း များနေရင်လည်း ဖြစ်တယ်။ Congenital adrenal hyperplasia ဆိုတဲ့မွေးရာပါရောဂါက အတော်ကိုရှားတယ်။ အရေပြားမှာ အနေရခက်လာမယ်။ ညစ်ပေလွယ်မယ်။ Acne ဝက်ခြံကနေဖြစ်ဖြစ် Seborrhoeic dermatitis အဆီပြန်အရေပြားနာကနေဖြစ်ဖြစ်လည်း ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
၀က်ခြံထွက်တတ်တဲ့ အသားအရည်ပိုင်ရှင်တွေ သိသင့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်
တစ်ခါတစ်ရံ သူများနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်မျက်နှာက ၀က်ခြံကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်မျိုးကြောင့် ရှိုးတို့ရှန်းတန်း ဖြစ်ဖူးလား။ အသားအရည် လှပကြည်လင်စေဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနေအောင် စမ်းကြည့်ဖူးလား။
မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံတွေထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ချက်ကတော့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မွေးမြူရေးနွားတွေဟာ နို့ထွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ ဟော်မုန်းဆေးတွေ အများကြီး ထိုးခံရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဟော်မုန်းတွေက အဆီထွက်တတ်တဲ့ အသားအရည်မျိုးတွေကို ၀က်ခြံတွေထွက်စေဖို့ တွန်းအားပေးလို့ပါပဲ။
မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံတွေအများကြီး ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ချိစ်၊ ထောပတ်၊ ရေခဲမှုန့်စတာတွေကို လျှော့စားဖို့၊ ရှောင်ကြဉ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
၃၊ ၄ ရက်တစ်ကြိမ် ခေါင်းအုံးစွပ်လဲလှယ်ခြင်းဟာလည်း ၀က်ခြံတွေပိုမို ဆိုးရွားသွားစေမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ညတိုင်း ခေါင်းအုံးအိပ်နေတဲ့ ခေါင်းအုံးပေါ်ကို ဆံပင်မှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယာားပိုးမွှားတွေက ရောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းအုံးစွပ်ပေါ်မှာ အိပ်ခြင်းဟာလည်း မျက်နှာပေါ်ကို ဘက်တီးရီးယားတွေ ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး ယားယံခြင်း၊ ၀က်ခြံထွက်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
ခေါင်းအုံးစွပ်မကြာခဏ လဲဖို့ပျင်းတယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ တံဘက်အသေးလေးတင်ပြီး အိပ်လို့လည်းရပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာတော့ ၀က်ခြံထွက်တာဟာ အပြင်ပမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် မဟုတ်ဘဲခန္ဓာကိုယ် အတွင်းကကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ ခရင်မ်တွေ၊ သောက်ဆေးတွေ၊ လေဆာရောင်ခြည်ကုသမှုတွေလုပ်ပေမယ့် ၀က်ခြံတွေသက်သာမသွားတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်ဓါတ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါသတဲ့။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်အဟာရဓါတ်နဲ့ အစားအစာတွေကို ပြည့်ဝအောင် မစားသောက်ဘူးဆိုရင် အစာအိမ်ထဲရှိ အက်ဆစ်ဓါတ်တွေ ပိုမိုထွက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။ အစာအိမ်တွင်း အက်ဆစ်ဓါတ်နည်းပါးတယ်ဆိုရင်တော့ Betaine HLC ဆိုတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပေးပြီး ဒါဟာ အသားအရည်နဲ့ ဆံပင်အဆီပြန်ခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ရာက မထနိုင်လောက်အောင် အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပေါ့အပါးသွားချင်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါသလား ? ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ အပေါ့သွားချင်တာကို အောင့်ထားတာက သင့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားကို တိုးတက်လာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ လှုံ့ဆော်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဆီးသွားချင်နေပေမယ့် မသွားပဲအောင့်ထားတာက ရုတ်တရက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းကို လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြားသောစိတ်လှုံ့ဆော်မှုတွေဖြစ်တဲ့ သွားရည်စာ စားချင်စိတ်တွေ၊ အပျင်းထူတာတွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆီးသွားချင်စိတ်ကို ထိန်းနိုင်တာက အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဆီးအိတ်ထဲမှာ ဆီးအပြည့်ရှိနေပြီး အပေါ့သွားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားရသူတွေက စမ်းသပ်မေးခွန်းတွေကို အပြည့်အ၀အာရုံစိုက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ရေတွေအများကြီးသောက်၊ ဆီးသွားချင်တာကို စွတ်အတင်းထိန်းချုပ်ထားလို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆီးအောင့်ထားခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကို အကြာကြီးအောင့်ထားမယ်ဆိုရင် အစပိုင်းမှာ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်နိုင်ချေတိုးမြင့်လာနိုင်ပြီး ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့ ဆီးအိမ်နံရံကို ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းတွေ နာကျင်လာသည်အထိ ဆီးကိုထိန်းမထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလက္ခဏာတွေက ဆီးသွားချင်တာကို ခံနိုင်တာထက်ပိုပြီး ထိန်းချုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခါ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ အပြီးလုပ်ရမယ့်အချိန်မျိုးမှာ ဆီးသွားချင်စိတ်ကို အနည်းငယ်ထိန်းပြီး အောင့်ထားမယ်ဆိုရင် အလုပ်မှာအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က အနည်းငယ် ကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပေမယ့် အလုပ်ဖြစ်တာကတော့ သေချာပါတယ်။
၁ - ဘယ်သွားသွား ရေဘူးသယ်သွားပြီး ရေသောက်တဲ့အကျင့်ကောင်းကို မွေးရမှာပါ။
(ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ကောင်းကောင်း ရှိနေဖို့လိုပါတယ်)
၂ - အရောင်ပါတဲ့ အသီးအနှံများများစားပြီး ကိုယ်ခန္ဒာရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကို ပံပိုးမှုကောင်းကောင်းပေးပါ။
၃ - ထမင်းမစားမီ ရေတစ်ခွက်သောက်တဲ့ အကျင့်လုပ်ပါ။
၄ - လေ့ကျင့်ခန်း ပေါင်းစုံလုပ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဗိုက်အဆီကျစေမယ့် အိပ်ထမတင် လုပ်တာမျိုးတွေကို ဇွဲရှိရှိနဲ့ လုပ်ပေးရပါမယ်
၅ - အငတ်မခံနဲ့ (မစားဘဲနဲ့နေတာဟာ အကူအညီ မဖြစ်ပါဘူး)
၆ - အရာရာ ရှောင်စရာမလို (ဟိုဟာမစားဘူး ဒီဟာမစားဘူး လုပ်စရာမလိုဘူးလို့ သိရပါတယ်)
၇ - ဆိုဒါပါတဲ့ အချိုရည်တွေ မသောက်ရပါဘူး။
၈ - ထမင်းကို နည်းနည်းချင်းစီကို ငါးကြိမ်အထိ ခွဲစားပေးရပါမယ်။ နည်းနည်းနဲ့ အကြိမ်ရေ များများစားတာကတော့ ခန္ဒာကိူယ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ အစာကျေညက်ချိန်ကိုရပါတယ်။
ဒါတွေကိ ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဗိုက်က သိသိသာသာ ချပ်လာမှာပါ။
2. မျက်နှာပေါ်က ရေဓာတ်နဲ့ PH ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့ မျက်နှာသစ်ပြီးချိန် Toner တစ်မျိုး သုံးပေးပါ။ အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူနဲ့ အထိအခိုက်မခံတဲ့ အရေပြားပိုင်ရှင်တွေအတွက် အရက်ပြန် မပါဝင်တာမျိုးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းအနှံ့ ဂွမ်းဖတ်လေးနဲ့ လိမ်းပေးပါ။
3. ရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ခရင်မ်တွေကို သင့်မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို လိမ်းပေးပါ။ အထူးသဖြင့် မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်နဲ့ နှုတ်ခမ်း ဘေးတစ်ဝိုက်နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ မှန်ကန်တဲ့ မိတ်ကပ် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်မျက်နှာက အဆီပြန်တတ်သူဆိုရင် အရည်အမျိုးအစား ဖောင်ဒေးရှင်းထက် ပေါင်ဒါ ပုံစံမျိုးကို ရွေးသင့်ပါတယ်။ ပေါင်ဒါ အမျိုးအစားက အဆီဓာတ် ပါဝင်မှု နည်းပြီး ခြောက်သွေ့စေတာကြောင့်ပါ။ သင့်အရေပြားက ခြောက်သွေ့ရင်တော့ အရည်အမျိုးအစားနဲ့ ခရင်မ်ပုံစံကို ရွေးပါ။ မိတ်ကပ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု မဖြစ်စေဖုိ့ သင့်လက်မောင်း အတွင်းပိုင်း နေရာမှာ အရင်ဆုံး ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်၊ မဖြစ် စမ်းသပ်ပြီးမှ ဝယ်ပါ
4.နံနက်ခင်းမှာ သစ်သီး အမျိုးမျိုး၊ ဂျုံနဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေကို ပါဝင်အောင် စားပေးပါ။ ဒါတွေက ဗီတာမင်စီနဲ့ အီး ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ ရေခြောက်ခွက်သောက်ပေးတာကလည်ူ အသားအရေအတွက် ကောင်းကျိုးကို ရရှိစေပါတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ၈ နှစ်သမီးလေး တပ်မတော်သားတစ်ဦးက rape လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ ကလေးမလေးက long term PEM နဲ့ စိတ်ကလည်းသိပ်မူမမှန်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Sept 23 မှာ rape လုပ်ခံရတယ်။ Oct 21 မှာ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်တယ်။ ဆရာဝန်က Cause of death မှာ Long term PEM ကြောင့်ဆုံးတယ်လို့ပြောတာ ဂျာနယ်တွေမှာပါလာတယ်။ ပြည်သူတွေက တပ်မတော်သား ရဲ့ rape ကြောင့် ဆုံးတာကို LTPEM ကြောင့်လို့ ဆရာဝန်ကပြောတဲ့အတွက် ဆရာဝန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Cause of death မှာ Rape ရောအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးခွင့်ရှိမရှိ သိလိုပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေက အစိုးရရဲ့ဖိအားကြောင့် ဆရာဝန်ကလုပ်တာဆိုပြီး ဆရာဝန်အပေါ် ပြစ်တင်ရှုံ့ချနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Cause of death မှာ Rape ရောအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ရေးခွင့်ရှိမရှိ သိလိုပါတယ်ဆရာ။
အဲလိုဖြစ်နေတာ ဗိုလ်နေဝင်းတက်ကတည်းကနေ အခုထိအထိ အတူတူပဲ။ အဲလိုတရားစီရင်ရေးစနစ်ထဲမှာ ဆရာဝန်ကို သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကို လိုသလိုရေးစေအောင်ခိုင်းနေတာ မလိုတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ မတရားလည်း လုပ်ချင် ဖုံးဖိချင်နေတယ်။ ဆရာဝန်ကို အငှားဖိုက်ဓါးထိုးခံစေနေတာသာဖြစ်တယ်။ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ပိုဆိုးလာတယ်။ စစ်အစိုးရလို မဆိုးတောဘူးလို့ပြောချင်တာနဲ့ ဥပဒေတွေ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ညီတယ်လို့ လုပ်ပြနေလို့ ပိုဆိုးတာဖြစ်တယ်။ တကယ်တန်း တရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်လာတော့ မဟုတ်ဘူး။
PEM ရောဂါမှာ AIDS လိုပဲ သေစေတဲ့ရောဂါတခုကြောင့်သာ သေရတယ်။ PEM ရောဂါသည်ကလေးမလေးဟာ အဓမ္မ (မုဒိန်း) ကျင့်ခံရလို့သာ အသေစောတာလို့ ရှေ့နေကလျှောက်လဲနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့့့်။ တရားရေးစနစ်အတွက် မဲပေးကြပါတယ်။
Hepatitis C prevention (စီ) ပိုး ကာကွယ်နည်း
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ အသည်းရောင် စီပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူးစက်နိုင် ပုံမှာကွဲလွဲမှုတွေ့ ရလို့ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ ဆရာ။ အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှကူးနိုင်တယ်နဲ့ မကူးနိုင်ဆိုတာပါဆရာ။ (ဆခရင်ရှော့တွေ ပို့ပေးတယ်။ အဲတာတွေက ကျွန်တော်ရေးတာ မဟုတ်ပါ။)
၂။ အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မယောက်ခမပါ။ အသက်က 52 ရှိပါပြီ။ AIDS ကလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ထဲက ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ငါးလလောက်ကမှ အသဲခြောက်ပြီး စီပိုးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဝမ်းလဲခဏခဏ လျောပါတယ်။ ပြီခဲ့တဲ့လက သွေးအန်ပြီး သွေးဝမ်းတွေသွားလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာကတော့ အသဲတော်တော်ခြောက်နေပြီလို့ ပြောတယ်ရှင့်။ လူကတော့ပိန်တာလေးဖြစ်နေပါပြီကျွန်မက ကလေးရှိတော့ ဘယ်လိုကူးစက်တတ်လဲသိချင်လို့ပါရှင့်။
၃။ ဆရာရှင့် ဦးလေးက စီပိုးရှိပြီး၊ အဖွားကဘီပိုးဖြစ်နေလို့ပါရှင့်။ အတူနေသူတွေပါ ကူးလားလို့ သိချင်လို့ပါ။
• (စီ) ပိုးကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါ။
• သွေးမစစ်ဘဲ သွင်းတာ၊ သွေး-သွေးချင်းထိတာ၊ ဆေးထိုးအပ် သီးခြားမသုံးတာ၊ နားကပ် လဲဝတ်တာ၊ မုတ်ဆိပ်ရိတ်ဒါး၊ သွားတိုက်တံ၊ လက်သဲညှပ် တွဲသုံးတာ၊ (တက်တူး) ထိုးတာ၊ ဟိုနေရာ ဒီနေရာ ကွင်းတပ်တာတွေကနေ ကူးရတာပါ။
• လိင်ဆက်ဆံရာကနေမကူးစက်ပါဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေက မများပါ။ သုတေသနတွေ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လိင်ဆက်ဆံဘက် များသူတွေ၊ (၂) ဆက်ဆံဘက်မှာ တခြားလိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တခုခုရှိနေရင်၊ (၃) လိင်ဆက်ဆံတာ ကြမ်းတမ်းရင်၊ ကူးစက်ဘို့ အခွင့်အလမ်းပိုမယ်။
• မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတွေ၊ သွေးနဲ့ သွေးထဲကပစ္စည်းသွင်းနေရသူတွေ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းလှူတာ လက်ခံရသူတွေ၊ ကျောက်ကပ် ဆေးနေရသူတွေ၊ ဆေးရုံ-ဆေးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ၊ HIV ပိုးရှိနေသူတွေ၊
• ပိုးရှိနေသူချက်ပြုတ်တာစားမိလို့ မကူးပါ။ လက်တွဲလျောက်တာ၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ တစ်အိမ်တည်း အတူနေတာနဲ့လဲ မကူးဘူး။ ချွေး၊ သွားရည်၊ မျက်ရည်တွေကနေမကူးပါ။ တအိမ်ထဲအတူနေသူတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များတာ မတွေ့ရသေးပါ။ ကူးမယ် ဆိုတာလဲ သွေးကနေ ဝင်လို့သာ ဖြစ်ပါမယ်။ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ ဖန်ခွက်၊ အိုး-ခွက် အတူသုံးလို့ မကူးပါ။ ရင်ချင်းအပ်-ပါးချင်းကပ်-လက်ဆွဲ နုတ်ဆက်တာတွေကနေ မကူးပါ။ အသာအယာ နုတ်ခပ်ချင်းစုပ်တာနဲ့လဲ မကူးပါ။ ရေအတူသောက်လဲ မကူးပါ။ ခြင်နဲ့ အင်းဆက်ပိုးတွေကနေကူးစက်တာမတွေ့သေးပါ။
• သူတို့အထဲက ၆ဝ-၈၅% က နာတာရှည် ဖြစ်လာရင်လဲရောဂါလက္ခဏာတွေဟာရှိသူတွေမှာသာရှိမယ်။ သူ့အသည်းက ပျက်စီးစပြုလာမယ်။ နှစ်တွေကြာမှလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၁။ မျက်ရစ်ဖော် ခွဲစိတ်မှူရဲ့ သမိုင်းကြောင်း။
မျက်ရစ်ဖော် ခွဲစိတ်မှူကို ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Dr. Mikamo က Suture Technique နဲ့ ပထမဆုံး စတင်ပြုလုဎ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Incision Technique ဆိုပြီး Technique အသစ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံက Dr. Maruo က ၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြုလုဎ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Multiple suture technique, dots technique နှင့် တခြားနည်းစနစ်တွေကိုပါ စတင်တီထွင် အသုံးပြုလာပါတယ်။ ယနေ့ဆိုရင် မျက်ရစ်ဖော် ခွဲစိတ်မှူဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အလွန်ခေတ်စားလာပါပြီ။ ဥရောပနဲ့အမေရီးကားမှာတော့ လူတော်တော်များများဟာ မျက်ရစ်ပါကြတော့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာသုံးတဲ့ Technique တွေထက်စာရင် Skin Removal Technique ဆိုပြီး မျက်ခွံအရေပြားတွဲကျတာကိုပြင်တာ မျိုးကိုပြုလုဎ်ကြပါတယ်။
၂။ မျက်ရစ်ဖော်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်။
မျက်ရစ်ဖော်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မျက်ရစ်ရှိတာကို ကျေနေလို့၊ မျက်ရစ်ပေါ်ချင်လို့ (Cosmetic purpose) ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ တော်တော်များများကတော့ Cosmetic purpose နဲ့ဖော်ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မျက်ခွံတွဲကျပြီး မျက်စိအထိဖုံးပြီး မတွဲကျလာအောင် (Preventive purpose) ဆိုပြီး အသက် ကြီးတဲ့လူတွေ ဖော်ကြပါတယ်။ တချို့သော မွေးရာပါ မျက်ရစ်မညီတဲ့လူတွေလည်း မျက်ရစ်ဖော်ကြပါတယ်။
မျက်ရစ်ဖော်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ် Technique ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူနားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ မျက်စိအပိတ်အဖွင့်လုဎ်တဲ့ကြွက်သားအလွှာ (Levator Aponeurosis) နဲ့ အရေပြားအတွင်းလွှာ (Dermis) ကို အပ်ခြည်နဲ့သေချာခြည်ခြင်းဖြင့် မျက်ရစ်ဖော်လာပါတယ်။ အများအားဖြင့် ထုံဆေးသာ သုံးပေမဲ့ တချို့ဆရာဝန်အနည်းစုကတော့ ထုံးဆေးရော Sedation ခေါ် အိပ်ဆေးပါသုံးကြပါတယ်။ ကြာချိန်ကတော့ မိနစ်၃၀ ကနေ ၄၅မိနစ် အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
၄။ မျက်ရစ်ဖော်တာက အကြီးစား ခွဲစိတ်မှုလား၊ အသေးစား ခွဲစိတ်မှုလား။
မျက်ရစ်ဖော် ခွဲစိတ်မှုဟာ (minor surgery) အသေးစားခွဲစိတ်မှု တခုဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်မှုကို သန့်ရှင်းပြီး ပိုးသတ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းလေး ထဲမှာလုဎ်လေ့ ရှိပါတယ်။
၅။ မျက်ရစ်ဖော် ခွဲစိတ်နေတုန်းမှာ နာလား။
ထုံးဆေး ထိုးတဲ့ အခိုက် ၁ ချက်သာ အနည်းငယ် နာကျင်တတ်ပေမယ့် တခြားအချိန်တွေကတော့ လုံးဝမနာပါဘူး။
၆။ မျက်ရစ်ဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေစိုးရိမ်စရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ။
မျက်ရစ်ဖော်တာက အသေးစားခွဲစိတ် မှူလေးဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းနည်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း မည်သည့်ခွဲစိတ်မှူမဆို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိပါတယ်။
(က) မျက်ရစ်ဖော်ပြီးခါစ ၂၄ နာရီ အတွင်း အနည်းငယ် နာကျင်ကိုက်ခဲတတ်ပါတယ်။
(ခ) မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၃ ရက် အတွင်း မျက်စိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောင်နေတတ်ပါတယ်။
(ဂ) တချို့သောသူများတွင် မျက်စိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနီရောင်၊ ပန်းရောင် အကွက်များ ပေါ်နေတတ်ပြီး ၁ ပတ်လောက်နေမှ အားလုံးပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
(ဃ) တချို့သောသူများတွင် မျက်ရေများ ခဏခဏ ကျတတ်ပါတယ်။
(င) တချို့သောသူများတွင် ကာလတို (၁ ပတ်မှ ၁၀ ရက်ခန့်) အမြင်အာရုံ ဝါးပြီးအားနည်းသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။
(စ) ဘယ်ဘက်မျက်ရစ် နှင့် ညာဘက်မျက်ရစ် မညီဖြစ်ခြင်း။
(ဆ) ပိုးဝင်ကာ အမာရွတ် ကျန်ခြင်း (အလွန်ရှားပါသည်)။
၇။ မျက်ရစ်ဖော်ခွဲစိတ်မှူ ခံယူပြီး လိုက်နာသိရှိထားရမည့် အချက်များ
(က) မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၂၄ နာရီးအတွင်း ရေခဲကပ်ပေးပါ။ ၁နာရီ ၁ကြိမ်ကပ်ပါ။ ၁ ကြိမ်ကပ်ပါက ၁၅ မိနစ်ခန့် ကပ်ပါ။ ရေခဲထုပ်ဖြင့် ချုပ်ရိုးပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် မကပ်ရ။ ပိုးသတ်ထားပြီး သန့်ရှင်းသော အဝတ် အား ချုပ်ရိုးပေါ်တွင်ခံပြီးမှ ရေခဲ ကပ်ရပါမည်။
(ခ) မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ခန်နာကိုယ် လှုပ်ရှားမှူအား တတ်နိုင်သမျှ မလုပ်ပါနှင့်။ ထိုင်ခုံး သို့မဟုတ် ကုတင်ပေါ်တွင် အနားယူပါ။
(ဂ) မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၂၄ နာရီကျော်ပါက ရေချိုးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရေချိုးပြီးပါက မျက်နှာအား တတ်နိုင်ပါက ရေကြာကြာမထိပါနှင့်။
(ဃ) မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၃ ရက် အထိ အိပ်နေစဉ် ဦးခေါင်းအား အမြင့်နေရာတွင် ထားပါ။ ညအိပ်စဉ်အတွင်း ခေါင်းအုန်း ၂ လုံး ပေါ်တွင် ဦးခေါင်းတင်၍ အိပ်ပါ။
(င) အနာမကျပ်ခင် ၅ ရက်အတွင်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ညော်နံ့ ရှူ ခြင်း၊ ဖုံ၊သဲ၊ အမှိုက် ဝင်ခြင်း စသည် တို့မှ ရှောင်ကျင်ပါ။
(စ) ချုပ်ရိုးမဖြည်ခင် ၅ ရက်အတွင်း မနက်၁ကြိမ် ည၁ကြိမ် Hydrogen peroxide solution ကို ပေါင်းတင်ထားသော ဂွန်း ဖြင့် စိမ်၍ ချုပ်ရိုးနေရာအား ဆေးကြောပါ။ ဆေးကြောပြီးပါက ချုပ်ရိုးနေရာအား Anti-biotic ointment လိမ်းပါ။
(ဆ) ချုပ်ရိုးမဖြည်ခင် အပြင်ထွက်ရမည်ဆိုပါက နေကာမျက်မှန် တပ်ပြီးမှ ထွက်ပါ။
(ဇ) ၇ ရက်မြောက်နေ့တွင် ချုပ်ရိုးဖြည်ပါမည်။ သို့သော် မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၂ ပတ်အတွင်း မျက်ကပ်မှန်၊ Eye liner နှင့် Eye make-up မလိမ်းပါနှင့်။
(ဈ) လူတဦးနှင့်တဦး၏ အနာကျပ်အားကောင်းမှူပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှူရှိတတ်ပါသည်။ တချို့သောသူများသည် မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ၃ ရက်၊ ၄ ရက် အထိ မျက်စိဝန်းကျင်တွင် အနီရောင် သို့မဟုတ် ပန်းနုရောင် အကွက်ကြီးငယ်များ ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။
(ည) ချုပ်ရိုးမဖြည်ခင် ခွဲကြောင်းနေရာအား လက်ဖြင့်ထိခြင်း၊ ချုပ်ရိုးအားဖြဲကြည့်ခြင်း၊ ချုပ်ရိုးပေါ်တွင် တိုင်းရင်းဆေးလူးခြင်း လုံးဝမလုဎ်ရ။
(ဋ) အကာင်းဆုံး ရလဒ် Final Result သည် ၂ ပတ် မှ ၁ လကျော် ခန့်မှ စတင်သိရှိနိုင်ပေလိမ့်မည်။
၈။ မျက်ရစ်ဖော်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာကြာခံသလဲ။
မျက်ရစ်ဖော်တဲ့ Technique ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ Suture Technique ဆိုရင်တော့ ၁ နှစ် ကနေ ၂ နှစ်၊ တခါတလေ ၅ နှစ်ကြော်အထိ ခံတတ်ပါတယ်။ Incision Technique ဆိုရင်တော့ ၁၅ နှစ်ကြော် (အမြဲ) ခံပါတယ်။ လူနာရဲ့ အသက်၊ အရေပြားအထူအပါး၊ အရေပြား တင်းရင်းမှူ၊ မျက်ခွံအတွင်းရှိတဲ့အဆီ ပမာဏ စတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။
M.B.,B.S (UMM, Mdy),
Ph.D (TMDU, Tokyo),
Member of Japanese Society of Aesthetic Dermatology,
Member of Japanese Society of Aesthetic Surgery.
လူနာတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဆရာ ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေပါတယ်လို့ ပြောပြီးတာနဲ့ရပြီး ဆေးကုတော့မယ်လို့ ထင်မိကြပါတယ် တကယ်တမ်းကျ လူနာပြောလာသည့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲမေးမြန်းစရာများစွာရှိလာပါတယ် ။တစ်ချို့မသိသူတွေက ဒါလေးများ ဒါလေးသောက်ပျောက်ပါတယ် လို့ ပြောကြသည့်လူ များစွာရှိသလို့ လုပ်ဆောင်ကြသူ သူတွေလဲ မနည်းပါ ။
မပေါ့သင့်သော ဦးခေါင်းပိုင်းဖြစ်နေတာကို မေ့လျော့မနေသင့်ပါဘူး ဒါကြောင့် ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ မေးခွန်းများစွာမေးရခြင်းသည့် ကာယကံရှင်လူနာအတွက်ပါ တစ်ချို့ က လက်မခံတာကို တွေ့ ကြုံရပါတယ် ။ဘယ်သူအတွက်ဆိုတာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ။
သာမန်ခေါင်းကိုက်နေခြင်းလား ပြင်းထန်စွာကိုက်ခဲပြီး အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်လား ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့် မေးခွန်းများစွာ အသေးစိတ်မေးမြန်း သိရှိလိုအပ်ပါတယ် ။
အခုခေတ်က ဆေးဝယ်ရတာလဲ လွယ်ကူတယ် မီဒီယာတွေအများစုတွင် ဒါလေးသောက်လိုက် ချက်ခြင်းပျောက် ၊ မော်ဒယ်မမတွေက ဒါလေးကိုဆောင်ထား အစရှိသည့် ဆေးကြော်ငြာလေးတွေက လူအတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာ ဒါလေးကိုဆောင်ထား ဝယ်သောက်လိုက်တော့ ခဏတာတော့ အစဉ်ပြေပျောက်နိုင်ပေမဲ့ သူရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုတော့ မမြင်မိတော့ ရေရှည်မှာ အန္တရာယ်တွေသာ လာပါမည်ဆိုတာ မသိဘဲ အလွယ်တကူဝယ်သောက် ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိစေလိုပါသည်။
ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုက်ခဲနေခြင်းကို ခေါင်းကိုက်ခြင်း(headache) လို့ ခေါ်ဝေါသတ်မှတ်ပါတယ် ခေါင်းပိုင်းကလေ လည်ပင်းအထိကိုက်ခဲလာခြင်းလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ် အဲလိုဖြစ်ပျက်တာကို ခေါင်းကိုက်ခြင်းလို့ ဘဲ သိထားရပါမယ် ။
လူတစ်ယောက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားသည့်အရာက ဦးနှောက် ( Brain ) ပါ ဦးနှောက်ဟာ အလွန်ပင် နုနယ်သိမ့်မွေသည့်အတွက် ထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိအောင် မာကြောသော Skull ဦးခေါင်းရိုး ဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးထားရပါတယ် ။
ဒီလိုနုညံ့သော ဦးနှောက်တွင် ခံစားမှု့ ပေါင်းစုံရှိပြီး ထိန်းသိမ်းနေရသည့်အတွက် တခါတရံ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတက်သလို့သောက်နေသည့် ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်တက်ပြီး ဦးခေါင်းထိခိုက်မှု့ ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။
သင်သည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာနာကျင်ကိုက်ခဲနေခြင်း ၊
ရက်ပိုင်းခြားတိုးပြီး ကိုက်ခဲလာနေခြင်း ၊ မကိုက်ခဲမှီ အန်လာခြင်း ၊ ကိုက်ခဲခြင်းများနှင့်အတူ ကိုယ်ခန္ဓာလေးလံထိုင်းမှိုင်းလားနေခြင်း ၊ အဖျားဝေဒနာနှင့် တွဲပြီး ရက်ရှည်ကိုက်ခဲလာခြင်း ၊ မိမိ အိပ်စက်ခြင်း မပြု့ မိ ဦးခေါင်းကိုက်ခဲနေခြင်း ၊ မိမိ အိပ်ယာထနိုးစက်သောလဲ ခေါင်းကိုက်ခဲနေခြင်းနှင့်အတူ ရက်ရည်ကိုက်ခဲခြင်း တိုးလာခဲ့ပါက မိမိဘာသာ သက်သာသော ဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်း မပြု့ လုပ်ဘဲ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဆရာဝန်ဖြင့် အစောအလျင်ပြသသင့်ပါကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာများ တိုးပွားလာမှု့ မဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ။
အသားအရေဟာ နေဒဏ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ ထိတွေ့ရဖန်များတဲ့အခါ အသားအရေ ထိခိုက်ပျက်စီး စေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ကျန်းမာလှပစေဖို့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်မှုများတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ လိမ္မော်သီးစတာတွေ စားပေးပါ။
နေ့စဉ် အစားအသောက်ထဲမှာ အင်တီအောက်ဆီဒင့် ပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတွေ ထည့်စားပေးရင် အရေပြား ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
Eating Habit (1) အမေရိကန်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ အင်တာဗျူး
မေး။ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာ ကြားဘူးပါတယ်ဆရာ။
ဆရာဝန်။ နှလုံးဆိုတာ အမြဲတန်းခုန်နေရတာမို့ သူခုန်ရမှာထက်ပိုအခုန်ခိုင်းရင် ပစ္စည်းများလိုဘဲ ကြာကြာသုံးလေ ပွန်းလေ ဟောင်းလေ မဟုတ်လားဗျာ။ သူ့ကို ထပ်ခုန်အောင် လုပ်ခိုင်းတာဟာ ကားကို ကားသက်ရှည်အောင် အမြန်မောင်းသလိုဘဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့၊ အိပ်သာနေပါဗျာ။
မေး။ ကျွန်တော် အသားလျော့ပြီး၊ အသီးအနှံပိုစားရင် ကောင်းမလားဆရာ။
ဆရာဝန်။ ဒီလိုတည့်တည့်စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ နွားတွေဘာစားလဲ မြက်တို့၊ ပြောင်းတို့စားတာမဟုတ်လား။ အဲတာတွေကကော ဘာတွေလဲ။ အသီးအနှံတွေလေ။ ဒါ့ကြောင်း အမဲသား(စတိခ်)ဟာ ခင်ဗျားကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အသီးအနှံတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပြောင်းပေးထားလိုက်ပြီးသားဗျ။ အစေ့အဆံလိုသလား။ ကြက်သားစားဗျာ။ အမဲသားဟာ အရွက်ကြော်ကောင်းတခွက်ဘဲ။ ဝက်သားစဉ်းကောကနေ ခင်ဗျာ့အတွက် အသီးအရွက်လိုအပ်ချက် ရာနုန်းပြည့်ရပါတယ်။
မေး။ ကျွန်တော် အရက်လျော့သောက်ရမလား။
ဆရာဝန်။ လုပ်မနေပါနဲ့။ ဝိုင်ဆိုတာ အသီးအနှံကနေလုပ်တာ။ ဘရန်ဒီကလဲ ဝိုင်ကိုချက်တာ။ တိတိကျကျပြောရင် သူ့ထဲကနေ ရေထုတ်လိုက်တာလေ။ ဒီတော့ ပိုမကောင်းပါလား။ ဘီယာကရော အစေ့အဆံကနေလုပ်တာ။ ဒီတော့ သောက်တာသောက်ပါ ကိုယ့်လူရာ။
မေး။ ကျွန်တော့်ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အဆီအချိုးကို ဘယ်လိုတွက်ရမလဲ။
ဆရာဝန်။ ခင်ဗျားမှာ ကိုယ်ခန္ဓာရှိရင် အဆီရှိမှာဘဲ။ တကိုယ်ထဲရှိတော့ တစ်အချိုး တစ်ပေါ့။ နှစ်ကိုယ်ရှိရင်တော့ တစ်အချိုး နှစ်။
မေး။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပြောပါအုံး။
ဆရာဝန်။ တခုမှ စဉ်းစားမရဘူးဗျ။ ကျွန်တော့ ဖီလော်ဆော်ဖီကတော့ ကိုယ့်အသားအနာမခံရေးဘဲ။
မေး။ ကြော်ထားတဲ့အစားတွေက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးပါသလဲ။
ဆရာဝန်။ ခင်ဗျား ကျွန်တော်ပြောတာ နားထောင်မှ မနေဘဲ။ ကနေ့ကာလမှာ အစားအစာမှန်သမျှ အသီးအနှံဆီနဲ့ ကြော်တာတွေချည်းဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစားအစာတွေထဲ ဆီကစိမ့်ဝင်တာပေါ့။ ဒီတော့ အသီးအနှံတွေများများဝင်တာ ခင်ဗျားအတွက် ဆိုးမတဲ့လားဗျာ။
မေး။ ထိုင်-ထ လုပ်တာကြောင့် ခါးကျပါသလား။
ဆရာဝန်။ မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်။ ကြွက်သားဆိုတာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ ကြီးလေမဟုတ်လား။ ခင်ဗျား ဗိုက်ထွက်ချင်ရင်တော့ ထိုင်ထလုပ်ပေါ့ဗျာ။
မေး။ ချော့ကလက်က ဘာဆိုးလဲ။
ဆရာဝန်။ ရူးနေသလား ခင်ဗျား။ ကိုကိုးကဘာလဲ၊ အသီးအစေ့ဘဲ။ အကောင်းဆုံးဗျ။ ကောင်းတာစားပြီး ကောင်းကောင်း ဇိမ်ခံပါလေ။
မေး။ ရေကူးတာ ကိုယ်ခန္ဓာလှမလား။
ဆရာဝန်။ ရေးကူးလို့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား လှ-မလှသိချင်ရင် ဝေလငါးကြည့်လေ။
မေး။ လူ့လိုက်ဖ်စတိုင်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းရှိဘို့ အရေးကြီးပါသလား။
ဆရာဝန်။ ဝတာကော ပုံပန်းတခုမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ ဒါတွေကတော့ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆမှားတွေပေါ့ဗျာ။ တခုသတိထားပါအုံး။ လူ့ဘဝဆိုတာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ကိုယ်အချိုးအစားလှလှလေးနဲ့ သင်းချိုင်းကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းရောက်အောင်သွားရမဲ့ခရီးလို့ သဘောမထားသင့်ဘူး။ လက်တဖက်မှာ ချော့ကလက်၊ တဖက်မှာ ဝိုင်ပုလင်းဆွဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုလဲ ကျကျနနကြီး အသုံးချပြီးသကာလ၊ နောက်ဆုံး ဝူ့း၊ ဝေါင့်း ကောင်းလိုက်တာ-ကောင်းလိုက်တာလို့ ပီတိသောမနဿဖြစ်ဘို့က ပိုမကောင်းဘူးလား။
ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်စားတာကိုယ် သတိထားနေသူများ။ သူများတွေ ဘာစားသောက်ကြလို့ ဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲကြည့်။
• ဂျပန်တွေဟာ အဆီနဲနဲစားပြီး၊ အမေရိကန်တွေထက် နှလုံးရောဂါအဖြစ်နည်းတယ်။
• မက်ဆီကန်တွေဟာ အဆီတွေ တအားစားပြီး၊ အမေရိကန်တွေထက် နှလုံးရောဂါအဖြစ်နည်းတယ်။
• တရုတ်တွေဟာ ဝိုင်နည်းနည်းသောက်ပြီး၊ အမေရိကန်တွေထက် နှလုံးရောဂါအဖြစ်နည်းတယ်။
• အီတာလျန်တွေဟာ ဝိုင်အများကြီးသောက်ပြီး၊ အမေရိကန်တွေထက် နှလုံးရောဂါအဖြစ်နည်းတယ်။
• ဂျာမန်တွေဟာ ဘီယာကို တဝကြီးသောက်ပြီး၊ အမေရိကန်တွေထက် နှလုံးရောဂါအဖြစ်နည်းတယ်။
ကျွန်တော် ဆရာဝန်ဖြစ်စမှာ ခင်မင်သူတွေက တခြားဆရာဝန်တွေထက် ကျွန်တော့်ဆီကိုလာပြတာ ပိုများတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုမေးရင် အရက်နည်းနည်းပါးပါး ကိစ္စမရှိပါဘူးတို့၊ အစားအသောက်လည်း အများကြီး မရှောင်ချင်နေပါ စသဖြင့် ပြောတတ်တာကို။ ကျွန်တော်ကလည်း သိနေတယ်လေ။ ဒီလူနာက အရက်ဖြတ်ပါဆို ဖြတ်မဲ့သူမှ မဟုတ်တာ။ ဆားအရှောင်ခိုင်းလည်း ငပိနဲ့ ဟင်းချိုမှုံ့တို့က ပြေးမလွတ်ဘူးမဟုတ်လား။
ဆရာဝန်လုပ်သက်ရင့်လာတော့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါးကြောင့် အကောင်း-အဆိုး ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်သင်ရဘူတဲ့ဆေးကျမ်းတွေမှာ မပါတာကို ပိုပြီးလက်ခံချင်လာတယ်။ အာဟာရတခုတည်းသာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ဆရာဝန်ပြောတာယူပေတော့။ သူက ကျန်တဲ့အကြောင်းသုံးပါးကို ဘေးချိတ်ပြီးပြောတာ။ ကံတရားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ ဓမ္မပဒ (၁) မှာ စိတ်သာလျင် ရှေ့သွားရှိကုန်၏လို့ပါတယ်။
ဆရာဆရာမတွေက ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို တချိန်တည်းမှာ အတူတူသင်ပေးတာပါ။ အောင်စာရင်းထွက်တော့ အမှတ်တွေ ဘယ်တူလို့လဲ။ အမှတ်တူသူတွေလဲ ကြီးတော့ အကျိုးပေးက တယောက်တမျိုး။ ဝင်ငွေကောင်းတာချင်း တန်းတူပေမဲ့ အသက်ရှည်တာခြင်းက မတူကြဘူး မဟုတ်ပါလား။ အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်၊ ဥစ္စာကို ကံစောင့်။ ဉာဏ်ကောင်းကြပါစေ၊ ကံကောင်းကြပါစေ။
Hair Care During Pregnancy ဆံပင်နှင့် ကိုယ်ဝန်
ဆရာ သမီးက ကိုယ်ဝန် ၁၅ ပတ်ပါ။ ဆံပင်ဖြောင့်တာ လုပ်လို့ရလား။
ခဏခဏ မေးကြတယ်။ ဓါတုဆေးသုံးရင် ကိုယ်ဝန် ရှိရှိ မရှိရှိ သတိထားသင့်။
ဆံပင်ဆိုတာ အဆင့်သုံးဆင့်နဲ့ပေါက်ပါတယ်။ ပေါက်ရာကနေ ကြီးထွားမယ်။ နားနေမယ်။ ကျွတ်မယ်။ လူတွေ တနေ့မှာ ပျမ်းမျှ ဆံပင် ၁ဝဝ ကျွတ်နေတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းအပိုတွေထွက်လာတယ်။ ဆံပင်ကိုလည်း သက်ရောက်တယ်။ တချို့သုတေသနအရ ဆံပင်ပိုထူလာတယ်လို့သိရတယ်။ အရေအတွက်များလာတာတော့မဟုတ်ပါ။ ပိုတုတ်လာတာ။ တချို့ ဆံပင်ပိုကောက်တယ်။
Chemicals ဓါတုဆေးမှန်သမျှ သတိထားရပါမယ်။ ဆံပင်ဆိုးဆေး၊ ဆံပင်ဟိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့ဆေး၊ ဆံပင်ပျော့ဆေး။ ကိုယ်ဝန်မှာ လုပ်ဖူးတာဆက်လုပ်ပါလို့ တချို့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်။ တချို့သုတေသနတွေကတော့ သတိပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပဌမသုံးလ။
Chocolate cyst ချောကလက် ဆစ်
၁။ အသက် ၃၉။ ၂၀၁၃မှာစဖြစ်ပြီး အရမ်းကြီးမနေနိုင်မှ ဆရာဝန်ပြတာ အပျိုပါ။ ရာသီလာချိန်မှာ ဆီးဝမ်းသွာရမှာကိုကျောက်နေပါတယ်။ ဆရာပြတဲ့ဆရာဝန်က ငယ်လို့မထုတ်ပေးစဉ်းစားခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုမများရင်ထုတ်ချင်လို့ပါဆရာ။ သိချင်လို့ဖြေပေးပါဆရာ။ ရိုင်းရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်မအသက် ၃၆ နှစ်၊ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ သားသမီးမရှိသေးပါ။့့ မှာနေပါတယ်ဆရာ။ အခုဒီမှာ OG နဲ့ ပြနေပါတယ်။ Ultrasound ရိုက်ပြီးသိရတာက Endometrioma / chocolate cyst လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ cyst က အကြီး 4.1cm နဲ့ အခြာအသေး ၂ လုံးရှိပါတယ်တဲ့။ ကျွန်မကသားသမီးလည်းလိုချင်နေတာဆိုတော့ OG က ခွဲစိတ်လိုက်မှ ရမယ်ပြောပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးရင်ရဖို့ နဲနဲလွယ်သွားပြီဟု ပြောပါတယ်ဆရာ။ ခွဲစိတ်စရိတ်က မြန်မာငွေသိန်း ၃၀ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ ကျွန်မစဉ်းစားရပါတယ်ဆရာ။ ကလေးရဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများရင် ခွဲစိတ်ချင်ပါတယ်။ မခွဲစိတ်ဘဲ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ သားသမီးရနိုင်ဖို့ ရှိပါသေးလားသိချင်မိပါတယ်ဆရာ။ ပထမအဆင့်ခွဲစိတ်ရမှာပဲလားဆရာ။ ငွေကုန်ကျခံပြီး သားသမီးရဖို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆရာ။ ဒီမှာဘာသာစကားအခက်ခဲကြောင့် ဘယ်လိုမေးမြန်းပြီး ကျွန်မဘာကို ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ ကူညီပေးပါဆရာရယ်။ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့ဆေးပညာစာများကို ဖတ်ရှုလေ့လာမှတ်သားနေသူပါ။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၇ ရှိပါပြီရှင်။ အပျိုပါရှင်။ ကျွန်မ့့ မှာ သားဥပြွန်မှာ ရေအိပ်တည်လို့ ခွဲရပါတယ်ရှင့်။ ချောကလက်လိုအရည်တွေ လို့ပြောပါတယ်ရှင့် ဆေးရုံဆင်းတော့ depo 150 mg ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ အခုဆို ကန်တော့ပါဆရာ ကျွန်မရာသီလာရင် ၅ ရက် ၆ ရက် လောက်များပြီးကျန်တဲ့ရက်က နည်းနည်းနဲ့ ဆင်းနေလို့ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါ သလားရှင့်။ ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ပြရမလား သိချင်ပါတယ်ရှင်။ လေးစားစွာဖြင့်။
၄။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ သမီးက ဗိုက်ခွဲပြီး ရေအိတ်ထုတ်ထားသူပါ။ ဘယ်ဖက်ရေအိတ်လို့ပြောပါတယ်။ သမီးက အိမ်ထောင်သယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ညာဖက်မှာလည်း ချောကလက်ရောင် အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုရင်လည်း သားအိမ်မှာလည်း သန္ဓေမတည်တတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေ များနေလားဆရာ။ သမီးကို ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပေးလားဆရာ။ အသက်က ၃၂ ပါဆရာ။့့ ကပါဆရာ။ တားဆေးလည်း ၂ လုံးကို ၁ လတကြိမ် ၆ လထိုးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ သမီးဘက်က မပြည်စုံတာမေးတာများ မှားမိရင်လွှတ်ပါဆရာ။
၅။ ဒေါက်တာရှင့် သမီးအသက်က ၂၇ ပါ။ လူကအကောင်သေးပါတယ်။ ခုသမီးသားအိမ်ထဲမှာ ချောကလက်ရောင် အစွေလေးတွေ ၂ ဘက်စလုံးမှာရှိနေပါတယ်။ သေချာအောင်လည်း အထွာဆောင်းရိုက်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ အိမ်ထောင်လည်း ရှိပါတယ်။ ကလေးလိုချင်တာလည်းမရပါဘူး။ ခု့့ မှာရောက်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြနေပါတယ်။ ကလေး မရနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ သားတားဆေးထိုးခိုင်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်က ၃ လခံဆေး ထိုးပါတယ်။ ၃ ခါထိုးပြီး ဆေးလွတ်လိုက်တော့ သွေးတွေအများကြီး ဆင်းလာပါတယ်။ သွေးတွေက အင်ဂျင်ဝိုင် အဟောင်းတွေလို မည်းနေပါတယ်။ မတ်တတ်ရပ်လို့မရအောင်ဆင်းပါတယ်။ သွေးတိတ်ဆေးတွေ နေ့တိုင်းစားရပါတယ်။ ၂၅ ရက်လောက်စားပြီး တခြားဆရာဝန်တယောက်နဲ့ ပြောင်းပြတဲ့အချိန်မှာ ဆေးပြန်ထိုးပေးလိုက်တာ ကောင်းသွားပါတယ်။ ခုလည်း သားတားဆေးပြန်ထိုးရမှာကြောက်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက တလအစမ်းထိုးကြည့်တာ ရာသီလာတာနည်းသွားပါတယ်။ အရင်လိုပြန်ဖြစ်မှာလည်း ကြောက်ပါတယ်။ ကလေးလည်းလိုချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲမသိတော့ပါ။ ရာသီလာရင်လည်း အရမ်းနာပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဖို့မေးတော့လည်း အလုံးတွေအရမ်းသေးလို့ ခွဲမရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၆။ သမီး အိမ်ထောင်ကျတာ တနှစ်နှင့်လေးလရှိပါပြီ။ သမီးက ၃၇ နှစ်၊ အမျိုးသားက ၃၅ နှစ်ပါ။ သားသမီး မရသေးပါ။့့ မှာ နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်စဉ်က အူအတက်ရောင်လို့ ခွဲစိတ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ သားဥပြွန်ညာဘက်ဘေးမှာ ချောကလက်ရောင် သွေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက် ဆရာဝန်က သွေးတွေကို စုပ်ထုတ်ပေးပြီး မီးရှို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယခင်ကလဲ ရာသီလာရင် ကိုက်ခဲတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။ OG နဲ့ပြတော့ သုံးလခံတားဆေး ၆ လဆက်ထိုးရမယ်ဆိုလို့ တကြိမ် ထိုးပါတယ်။ ကလေးယူဘို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ဒီဇင်္ဘာလထဲမှာ သွေးနဲနဲဆင်းလို့ ရန်ကုန်က OG ကိုပြတော့ တားဆေး ဆက်မထိုးဘို့ပြောပါတယ်။ ဒီကိုပြန်ရောက်ပြီး သွေနည်းနည်းလာနေတာ တလကျော်ကြာနေပြီ။ ရိုးရိုးဆရာဝန်က Meliane ဆေးပေးပါတယ်။ ၂၁ ရက်သောက်ရတယ်။ ဆေးကုန်လို့ ရာသီပြန်လာတော့ အရမ်းကိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သမီးကို အကြံပေးပါရှင့်။
သတ်ပုံတွေအရင် ပြင်ပါရစေ။ ကြောက်နေလို့ ရေးရတယ်။ ဆိုးရိမ် မဟုတ်၊ စိုးရိမ်။ တိချင်တာလေးမဟုတ် သိချင်တာလေး။ ဗိုက်ခွဲပီမဟုတ် ဗိုက်ခွဲပြီး။ အနည်းငယ်ရှိတေးတယ်မဟုတ် အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်။ သအိမ်မဟုတ် သားအိမ်။ ကျေးဇူးပြုပီမဟုတ် ကျေးဇူးပြုပြီး။
ဖြစ်တဲ့သူတွေက ၃၉ အပျို၊ ၃၆ သားသမီးမရှိ၊ ၃၇ အပျို၊ ၃၂ အပျို၊ ၂၇ သားသမီးမရှိသေး၊ ၃၇ နှစ် သားသမီးမရှိသေး။
ဒီစာကိုရေးတုန်းက ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမို့ ချောကလက်တွေရောင်းကောင်းနေချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက်ဆစ် မျိုးဥအိမ်ရောဂါကို Endometrioid cyst နဲ့ Endometriosis of ovary လို့လည်းခေါ်တယ်။ ဒီရောဂါဟာ Endometriosis သားအိမ်ရောဂါတမျိုးကနေဖြစ်တယ်။ (စာ ၂ ပုဒ်ရေးထားပါတယ်။)
Endometrial tissue ခေါ် သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာတစ်ရှူးတွေက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရောက်နေတာကို ခေါ်တယ်။ သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာဆိုတာ ရာသီစက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ အမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲနေတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ပါးရာကနေ ထူတယ်၊ ကြီးရင့်မယ်၊ ပျက်စီးပြီး သွေးဆင်းတယ်။ အဲဒီ တစ်ရှူးတွေက မျိုးဥအိမ်မှာရောက်နေလို့ ဒီဖြစ်စဉ်ကလဲ အဲဒီနေရာမှာ ဖြစ်နေတော့မယ်။ ခက်တာက သားအိမ်လို ထွက်တဲ့သွေးက ဆင်းထွက်စရာ မွေးလမ်း (ဗဂျိုင်းနား) မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သွေးတွေက အောင်းနေ၊ စုဝေးနေပြီး အိတ်ဖြစ်လာတော့တယ်။ အရောင်ကသွေးဖြစ်လို့ ရက်ကြာလေ အရောင်ပြောင်းလေ။ နီညိုညိုအရောင်ကို ချောကလက်လို့ခေါ်ကြတာမို့ မျိုးဥအိမ်မှာ ချောကလက်အိတ်လို့ ခေါ်တယ်။ သွေးဟောင်းတွေက ပေါက်ထွက်လာနိုင်ပြန်တယ်။ ဘေးမှာရှိတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်နဲ့ အစာလမ်းတွေပေါ်ရောက်နိုင်တယ်။
• NSAID အနာ-အကိုက်သက်သာဆေးတွေသောက်ရမယ်။ (စာတပုဒ်သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။)
• Hormonal contraception ဟော်မုန်းပါ ကိုယ်ဝန်တားဆေးပေးမယ်။ မျိုဥမထွက်တဲ့ ရာသီစက်ဝန်း ဖြစ်နေအောင် လုပ်ပေးမယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးမရစေနိုင်ပါ။
• Progestational agents (Medroxyprogesterone), Danazol, Gestrinone, or Gonadotropin-releasing hormone agonists (GnRH) ဆေးတွေကိုသုံးတာ များတယ်။
• GnRH ဆေးကို estrogen နဲ့ progestogen ရောပေးတာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
• ဒီဆေးပေးနည်းတွေက အားလုံးကို ပျောက်စေတာတော့ မဟုတ်ပါ။ (ဆောရီး) ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိပါမယ်။ ဥပမာ မျက်နှာနီမြန်းတာ၊ အရိုးထုထည်နည်းတာ၊ အသံနက်နဲတာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတာ၊ မျက်နှာမွှေးများတာ။
• Laparoscopic surgical approaches ခွဲစိတ်ကိရိယာသုံးပြီး Ovarian adhesions မျိုးအိမ်မှာ တွယ်ကပ်နေတာတွေကို ရှင်းမယ်။ တချို့မှာ Surgical removal and excision ခွဲစိတ်ထုတ်ဘို့လိုမယ်။
• Laser surgery လေဆာနည်းနဲ့ Cauterization လျှပ်စစ်နည်းလဲသုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မထိရောက်တာ တွေ့ရတယ်။
• Endometrioma drainage နည်းနဲ့ Sclerotherapy နည်းတွေရှိပေမဲ့ သိပ်မကောင်းလှပါ။
• Conservative surgery ကလေးရနိုင်အောင် ထိန်းပြီးခွဲစိတ်နည်းကိုလဲ လုပ်ဘို့လိုတတ်တယ်။ သတိထားဘို့ရှိပြန်တာက
• FSH values ဟော်မုန်းတက်လာနိုင်ပြီး၊ မျိုးဥအိမ်အလုပ်ကိုနည်းစေနိုင်တယ်။
• Operative laparoscopic surgery ကိရိယာသုံးခွဲစိတ်နည်းကနေ မျိုးပွါးနိုင်ချေကောင်းစေနိုင်ပြီး၊ နာတာကို သက်သာစေနိုင်တယ်။
• Radical surgical options မရတဲ့အဆုံး အားလုံးထုတ်ပေးရတဲ့ခွဲစိတ်နည်းမှာ Singular or bilateral oophorectomy မျိုးဥအိမ်ကို တဖက်ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ရတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီး သားသမီး ရ မရ အာမခံချက်တော့ မရှိပါ။ ဆောရီး။ ရောဂါကိုတော့ စနစ်တကျ ကုသရပါမယ်။